* Light Of Myanmar *: 2007
Posted by * In Search of Truth * at 3:41 PM 36 comments Links to this post
ဒီမိုကရေစီသမားတွေဟာ အချိန်ပြည့်နအဖကို အတင်းတုတ်တာနဲ့ စိတ်ကူးယဉ်တာကလွဲလို့ လက်တွေ့ကျတဲ့ အလုပ်တွေ ၊ စဉ်းစားတာတွေ အခုထက်ထိ စပြီး မလုပ်ကျသေးပါဘူး။ နအဖကိုပဲ ထိုင်ပြီးအတင်းတုတ်ဟာ တိုင်းပြည်အတွက် မကောင်းဘူးလို့ ကျနော်တို့ အတန်တန်ပြောပါတယ်။ တကယ်တော့ တိုင်းပြည်အတွက်တင်မဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့အတွက်လည်း မကောင်းပါဘူး။ သူတို့ ဦးနောက်တွေဟာ အပျက်ပြောရုံပဲ တွေးတောနိုင်ပြီး တကယ်လက်တွေ့ကျတဲ့ လုပ်ဆောင်မှုကို မစဉ်းစားနိုင်ကျတော့ဘူး။ နားလည်လွယ်အောင်ပြောရရင် သူတို့တွေမှာ ကျက်သရေ တုံးသွားတယ်လို့ ပြောရမှာပါ။ မုံန်းလို့ပြောနေတာ မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။ စိတ်ဆိုတာ တကယ်ကို ဆန်းကျယ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့နှစ်ယောက် ပြောတာ ဟုတ်မဟုတ် ဒီမိုကရေစီသမားတွေ လုပ်ကိုင်ပုံ သေခြာလေ့လာကြည့်ပါ။ သူတို့ဆီမှာ ဒီမိုကရေစီရရှိရေးအတွက် အကြံပြုနိုင်တဲ့သူ တစ်ယောက်မှ မရှိပါ။
နောက်တစ်ခုကတော့ သတင်းဌာနတွေရဲ့ ဆိုက်ဝါးဆိုးကျိုးလို့ ပြောချင်ပါတယ်။ သတင်းဌာနတွေဟာ နအဖ မကောင်းတာနဲ့ နအဖကို ရှုံးနိမ့်တဲ့ သတင်းတွေကို လိုသလို ဖန်တီးပြီး ရေးသားနေကျပါတယ်။ ကျနော်တို့ မေးကြည့်ပါမယ်။ ရိုးသားစွာဖြေပါ။ သတင်းတွေ နားထောင်တိုင်း စိတ်ထဲမှာ နအဖကို အထင်သေးစိတ်နဲ့အတူ နအဖ ဒုက္ခရောက်တော့မယ် ဆိုတဲ့ အတွေး အစ်ကိုတို့မှာ မဖြစ်ဘူးလား? အနည်းနဲ့ အများဆိုသလို ဖြစ်ကျမှာပါ။ အဲလိုဖြစ်နေတာဟာ မကောင်းပါဘူး။ အမှန်ကို အမှန်အတိုင်းသိတာပဲ ကောင်းပါတယ်။ ဒါမှ မှန်ကန်တဲ့ တုံ့ပြန်မှုကို လုပ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တနည်းပြောရရင် မျက်ကန်းတစ်ယောက်လို မဖြစ်ဖို့ပါ။ တကယ်တော့ နအဖ ဟာ အင်မတန် အင်အားရှိတဲ့ အဖွဲ့အစည်းပါ။ သူတို့ ညံ့တာ စီးပွားရေးစီမံပုံပါပဲ။ အာဏာတည်မြဲရေးမှာ အင်မတန်ကို တော်ပါတယ်။ နအဖ ဒုက္ခမရောက်ပါဘူး။ အင်အားလဲ အရမ်းကို ကြီးမားလာပါတယ်။
လူထုဆန္ဒပြပွဲ ဖြစ်ပေါ်လာတာ ဘယ်သူ့လက်ချက်လဲ? နအဖမလက်ချက်လားလို့ နည်းနည်းလေး သံသယရှိပါတယ်။ အထောက်အထားတော့ မရှိပါဘူး။ သံသယဖြစ်ရုံသက်သက်ပါ။ သေချာတာကတော့ ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့တွေဟာ အရင်းပြုတ်သွားတယ် ဆိုတာပါပဲ။ ၁၉၈၈ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေလည်း ထောင်ထဲမှာ ဆွဲထည့်ခံထားရပါပြီ။ အဲဒါနအဖ သူလုပ်နိုင်တာကို လက်စွမ်းပြလိုက်တာပဲ။ ဒီမိုကရေစီရဖို့ နီးလာပြီဆိုတာ ဘယ်နေရာကိုကြည့်ပြောတာလဲ? အဲဒါတွေဟာ စိတ်ကူးယဉ်ပြီး အရည်မရ အဖတ်မရ လျောက်ပြောနေတာ သေချာပါတယ်။ နအဖ ဒီအဆင့်မှာ ရပ်သွားမယ်ထင်နေလား? ကျနော်ကတော့ မထင်ဘူးဗျ။ နအဖဟာ အင်မတန် နိုင်ငံရေးကစားကွက် တော်ပါတယ်။ နောက်တလှမ်း ရှေ့တိုးလာနိုင်ပါတယ်။ အဲဒါက ဘာလဲဆိုရင် NLD ပါတီကို ဖျက်သိမ်းပြစ်နိုင်ပါတယ်။ နအဖ မလုပ်နိုင်ဘူးမထင်ပါနဲ့။ သူမှာ လုပ်နိုင်တဲ့ အစွမ်းအစရှိပါတယ်။ လက်တွေ့ကျကျ စဉ်းစားပါ။ ဘယ်သူက သူ့လုပ်ရပ်ကို ဆန့်ကျင်နိုင်မှာ မို့လဲ? အဲလိုလုပ်ရင် အမေရိကန် ၀င်လာမယ် မထင်ပါနဲ့။ တကယ်လက်တွေ့ ၀င်လို့မရပါ။ ကုလသမဂ္ဂ ကူညီနိုင်မယ် မထင်ပါနဲ့။ ကုလမဂ္ဂဟာ ဥပဒေအရ ပြည်တွင်းရေး ကိစ္စကို ပါးစပ်နဲ့ပဲ ပြောခွင့်ရှိပါတယ်။ တိုင်းပြည်တစ်ခုနဲ့ တစ်ခု ဖြစ်လာတဲ့ ပြဿနာကိုပဲ ကုလသမဂ္ဂ၀င်လို့ ရပါတယ်။ ဥပမာ ကူဝိတ် နဲ့ အီရတ် ကိတ်စ။ တရုပ်အနေနဲ့ စီးပွားရေး အင်အားကြီးလာသလို အနီးဆုံးမိတ်ဆွေ နအဖကိုလည်း နောက်ကွယ်ကနေ အထောက်အပံ့တွေပေးမှာပါ။ လူထုက အသေခံပြီး ဆန္ဒပြမယ်လို့ အိပ်မက် မမက်ပါနဲ့။ ဘယ်သူမှ လုပ်မှာ မဟုတ်ပါ။ သေချာစဉ်းစားကြည့်ပါ။ နအဖကို ဒဏ်ခတ်တာဟာ နောက်ဆုံးအဆင့်ကို ရောက်နေပါပြီ။ စီးပွားရေး အခုထက်ပိုပြီး ဘယ်လိုပိတ်ဆို့နိုင်မလဲ?
ဒီမိုကရေစီအဖွဲတွေ မှိုလိုပေါနေတာကို ဘာပြောလဲဆိုရင် နအဖကို ဘက်ပေါင်းစုံက ဆန့်ကျင်နေတာတဲ့ဗျ။ ကျနော်တို့နှစ်ယောက်ကတော့ အဲလိုမထင်ပါဘူး။ ခေါင်းဆောင် လုပ်ချင်သူတွေများလို့ အဖွဲ့တွေ များနေတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ အဏာရူးတဲ့ လက္ခဏာပေါ့ဗျာ။ (ပိုက်ဆံလိုချင်လို့ ထောင်ထားတဲ့ အဖွဲ့တွေတော့ စာရင်းထဲမှာ မထည့်တော့ပါဘူး။ ) တချို့က ပြောတယ် သူတို့နည်း သူတို့ဟန်နဲ့ နအဖကို ဆန့်ကျင်နေတာပဲ ကိစ္စမရှိပါတဲ့။ ကျနော်တို့အမြင် အဲဒီစကားဟာ အရမ်းကို ဥာဏ်နည်းလွန်းလို့ပြောတယ်လို့ ယူဆပါတယ်။ လက်တွေ့ကျကျ တွေးကြည့်ပါ။ မိမိလမ်းစဉ်သည်သာ အကောင်းဆုံးဆိုပြီး လုပ်နေကျတော့ ဘာမှ မထိရောက်ပဲ ဖြစ်ကုန်ပါတယ်။ ထင်ရှားတဲ့ ဥပမာပေးရမယ်ဆိုရင် ABSDF ဟာ လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေးလုပ်ပါတယ်။ NLD က လက်နက်မကိုင်ပဲ ဆန့်ကျင်ပါတယ်။ ဒီနှစ်ခုရဲ့ လမ်းစဉ်ဟာ လုံးဝ ဆန့်ကျင်နေပါတယ်။ NLD လမ်းစဉ်လည်း အားနည်းသွားစေသလို ABSDF လည်း စစ်လက်နက်နဲ့ လူအင်အားရရှိရေးမှာ ထိခိုက်သွားပါတယ်။ နောက်မြင်သာတဲ့ ဥပမာပေးရမယ်ဆိုရင် စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုကို တင်ပြတယ်ဆိုပါဆို့။ တကယ်တမ်းအားလုံး ညီညီညွတ်ညွတ် လုပ်ရင် အင်အားပိုများတဲ့အတွက် ထိထိရောက်ရောက် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သံရုံးရှေ့ဆန္ဒသွားပြတာတောင် လူဆယ်ယောက် မပြည့်ကျပါဘူး။ စဉ်းစားပါဦး(စီးပွားရေးပိတ်ဆို့တာကို သဘောတူလို့ ပြောတာ မဟုတ်ပါ။ ခေါင်းထဲပေါ်လာတဲ့ ဥပမာ အလွယ်တကူရှာမတွေ့လို့ပါခင်ဗျာ)
အထက်က တင်ပြခဲ့သလိုပဲ အဖွဲ့တွေ မှိုလိုပေါနေတာကို မှန်ကန်တယ်လို့ မထင်ပါဘူး။ အဖွဲ့များတော့ စိတ်တွေများပြီး ဘာမှ ထိရောက်မှုမရှိပဲ နအဖကို ပန်းနဲ့ပေါက်တဲ့အဆင့် ဖြစ်ကုန်ရော မဟုတ်လား? ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို မဟာဗျူဟာအရ အားထားလို့ မဖြစ်ပါဘူး။ စွန့်ပယ်လို့လဲ မရပါဘူး။ သူဟာ ပြည်တွင်းမှာနေမှ ပြည်သူတွေနိုင်ငံရေးအသိ နိုးကြားနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ သူကို ပြည်တွင်းမှာ စတေးရမှာပါ။ (ကျနော်တို့ ဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ထောက်ခံသူများ မဟုတ်ပါ။ ပြောသင့် ပြောထိုက်လို့သာ ပြောနေခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ တိတိကျကျ ပြောရရင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အရမ်းမုံန်းပါတယ်ခင်ဗျာ) အဲလိုပြည်တွင်းမှာ နေရတဲ့အတွက် သူတို့တွေဟာ နအဖဖမ်းဆီးချင်းကို ခံရပါတယ်။ လွတ်လာရင်လဲ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ပြောဆိုလုပ်ကိုင်လို့ မရပါဘူး။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သူဟာ ပြည်တွင်းမှာပဲ ဆက်လက်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီတော့ ခေါင်းဆောင်မရှိပဲ အောင်မြင်အောင်လုပ်ဖို့ဆိုတာ ဖြစ်နိုင်လား? နအဖဟာ အရင်ကထက် ပိုပြီး အင်အားကြီးထွားလာပါတယ်။ အခြေပိုခိုင်မာလာပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုဟာ တနေ့တခြား အားနည်းလာပါတယ်။ နိုင်ငံရေးကို အချိန်ပေး လုပ်နိုင်သူဟာ ပြည်ပမှာတောင် အနည်းစုပဲရှိပါတယ်။ အဲဒီလူနည်းစုဟာ အဖွဲ့ပေါင်း သောင်းခြောက်ထောင် ထဲမှာ ခွဲပြီးလုပ်နေတော့ အဖွဲ့တွေဟာ ထိရောက်စွာ လုပ်နိုင်စွမ်း မရှိတော့ပါဘူး။ ဒီတော့ မှိုလိုပေါနေတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေကို စုစည်းပြီး ခိုင်မာသော လမ်းစဉ် အကောင်အထည်ဖေါ်ဖို့ ခေါင်းဆောင်ရှိမှ ဖြစ်ပါမယ်။ ခေါင်းဆောင်ရှိတော့ ပြည်ပလူတွေကို အခုထက်ပိုပြီး ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုမှာ ဦးဆောင်နိုင်ပါတယ်။ ဦးတည်ချက်ဟာလည်းပိုမို တိကျပြီး အင်အားကောင်းကောင်းနဲ့ လှုပ်ရှားနိုင်တဲ့အတွက် ပိုမိုထိရောက်နိုင်ပါတယ်။
အချိန်တန်ရင် ပြည်သူ့ခေါင်းဆောင် သူ့ဖာသာ ပေါ်လာမယ်ဆိုပြီး ထိုင်စောင့်နေလို့ရမှာ မဟုတ်ပါ။ ပေါ်လာအောင် တစ်ခုခုလုပ်မှ ဖြစ်ပါမယ်။ ကျနော်တို့စည်းစား ထားတာလေးကို တင်ပြချင်ပါတယ်။ စဉ်းစား ကြည့်ပါ။ မရှင်းတာရှိရင် အားမနာတမ်း comment မှာ မေးပါ ။ (Comment တွေ ဖတ်လို့ မြန်မာစာ မမြင်ရရင် ခေါင်းစဉ်ကို Click လုပ်ပါ။ Comment တွေ ဖတ်နိုင်ပါမယ်) နိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့ နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေ အားလုံး ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ကို မဲပေးစံနစ်နဲ့ ရွေးချယ်ရန်ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီခေါင်းဆောင်ဟာ ၄ နှစ်သာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခွင့် ပေးသင့်ပါတယ်။ သို့မဟုတ်ပါက အချိန်ကြာလေ အဏာ ယစ်မူးလေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ ပြည်ပရောက်မြန်မာများအားလုံး မဲပေးရွေးချယ်နိုင်တဲ့ ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ေ၇ွးကောက်ပွဲလုပ်နိုင်အောင် ရည်မှန်းချက်ထားသင့်ပါတယ်။ အင်တာနက် ခေတ်မှာ သိပ်ပြီး မခက်ခဲပါ။ ဒါမှသာ ပြည်သူတွေအနေနဲ့ပိုမို စိတ်ဝင်စားလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပြီး ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူဟာ အခမဲ့ အလုပ်လုပ်ချင်မှာ မဟုတ်ပါ။ ခေါင်းဆောင်ကို လစာပေးဖို့ ရန်ပုံငွေရရှိရေး အတွက်လည်း စဉ်းစားသင့်ပါတယ်။ ဥပမာ အသင်းဝင်ကြေး ကောက်ခံတာမျိုး။ လစဉ်အလှူငွေကို ပြည်ပရောက်မြန်မာများထံမှ အလှူခံတာမျိုးတွေပါ။ ပြည်ပ အစိုးရတွေဆီက ထောက်ပံ့ကြေးကိုယူမယ်ဆိုရင် သတိထားပါ။ ကြိုးဆွဲချင်လို့ ငွေပေးတဲ့ သဘောတွေပါ။ ထောက်ပံ့သူ စိတ်ချမ်းသာအောင် အလိုလိုက် အကြိုက်လုပ်ရင် ပြည်သူတွေ ယုံကြည်မှု နည်းသွားနိုင်ပါတယ်။ ခေါင်းဆောင်တွေ မသမာမှုတွေ လုပ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် မြန်မာတွေဆီကပဲ အလှူငွေရအောင် ကြိုးစားရှာဖွေ ကြည့်ပါလို့ အကြံပြုလိုပါတယ်။
(၁) ပထမဆုံးအနေနဲ့ နအဖ နိုင်ငံရေး ကစားချင်တိုင်း ကစားလို့ရတဲ့ လူထုခေါင်းဆောင် မဟုတ်တော့ပါဘူး။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အရုပ်လေးတစ်ခုလို ထောင်သွင်းလိုက် ထုတ်လိုက်နဲ့ ကစားနေတာ အားလုံးအသိပါ။
(၂) အဲဒီခေါင်းဆောင်ဟာ အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးကနေ ရွေးချယ်ထားတာမို့ အဖွဲ့တွေ အားလုံးစည်းလုံးရေးကို လုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ရှိပါတယ်။
(၃) ပြည်ပရောက် မြန်မာများအနေနဲ့ ယခုအချိန်မှာ များပြားလွန်းသော အဖွဲ့အစည်းများတွင် ဘယ်အဖွဲ့ကို ထောက်ခံရမှန်းမသိပဲေ၀၀ါးနေတာမျိုးရှိမှာ မဟုတ်တော့ပါ။
(၄) ဒီမိုကရေစီရရှိရေးအတွက်လည်း အဖွဲ့အစည်း အသေးအကြီး မခွဲခြားပဲ လက်တွေ့ကျတဲ့ အကြံကို သူကနေ ဖေါ်ဆောင်ဖို့စဉ်းစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အခုအချိန်မှာတော့ အဖွဲ့သေးလေးတွေဟာ လူအင်အားနဲ့ အဆက်အသွယ်နည်းပါးမှုကြောင့် အကြံကောင်းပေမယ့် အလကားဖြစ်သွားတာတွေ ရှိနိုင်ပါတယ်။
(၄) နိုင်ငံခြား အစိုးရများ နှင့် ကုလသမဂ္ဂ ဟာ အတိုက်အခံနဲ့ စကားပြောဖို့ လိုက်ကြည့်တိုင်း အဖွဲ့အစည်း အများကြီးဖြစ်နေတော့ သူတို့ စကားပြောဖို့ လူရှာရတာ အခက်အခဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီခေါင်းဆောင်ဟာ အတိုက်အခံအားလုံး ကိုယ်စားပြု ဆွေးနွေး ညှိနှိုင်းတာမျိုးတွေ လုပ်နိုင်ပါတယ်။
အထက်မှာတင်ပြခဲ့သလိုပဲ အဲဒီခေါင်းဆောင်သစ် ရွေးချယ်ချင်းဟာ ကောင်းတာတွေ အများကြီးလုပ်ဆောင် နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အားနည်းချက်တစ်ခုတော့ ရှိနေပါတယ်။ သူဟာ ပြည်ပမှာနေတဲ့သူမိုလို့ ပြည်တွင်းသူတွေရဲ့ ခံစားချက်နဲ့ ထင်မြင်ချက်တွေကို နားလည်ဖို့ အစွမ်းရှိမှာ မဟုတ်ပါ။ ဒါ့ကြောင့် အဲဒီခေါင်းဆောင်ကိုပဲ အရမ်းမှီခိုလွန်းရင်လည်း ပြည်တွင်း ခြေကုတ်လုံးဝ လွတ်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဘယ်လိုမျှအောင် ဘယ်လို လုပ်မလဲဆိုတာ စဉ်းစားဖို့ပါ။
ကျနော်တို့အနေနဲ့ Virtual country လို့ခေါ်တဲ့ စံနစ်သစ်လေးကိုလဲ ရေးပြီးဖြစ်ပါတယ်။ နောက်နေ့မှာ တင်ဖို့ရှိပါတယ်။ အခွန်ရယူနိုင်တဲ့ နည်းစံနစ်ကို တင်ပြပါမယ်။
Posted by * In Search of Truth * at 2:42 PM 31 comments Links to this post
Posted by * In Search of Truth * at 7:05 PM 34 comments Links to this post
ဒီမိုကရေစီသမားတွေဟာ လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်ကို ရရှိအောင် နအဖထံကနေ တောင်းဆိုနေကျပါတယ်။ တကယ်တမ်း လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုခွင့်ကို စည်းကမ်းရှိစွာ အသုံးချတတ်သလားလို့ အားမနာတမ်း မေးကြည့်ရအောင်ပါ။ ဘလော့တွေမှာ ရှိနေတဲ့ ဆီပုံးဟာ လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်ရတဲ့ နေရာပါ။ အဲဒီလွတ်လပ်တဲ့နေရာ လေးကို သူတို့ ဘယ်လိုအသုံးချလဲ လေ့လာကြည့်ကျပါဦး။ ကျနော်အပါအ၀င် ကို Oppositeyes ဘလော့၊ သာကီနွယ်ဘလော့တွေကို ကြည့်ရင် အလွယ်တကူတွေ့နိုင်ပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီသမားတွေဟာ အမေတွေ၊ နှစ်မတွေနဲ့ ကိုင်ပေါက်ပြီး ဆီပုံးပိုင်ရှင်တွေကို ဆဲဆိုကျပါတယ်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတိုက်ခိုက်ကျပါတယ်။ ကျနော်တို့ ဆီပုံးမှာဆိုလည်း “ဇော်မျိုး” နာမည်နဲ့ တခြားလူတွေ အထင်အမြင်လွဲအောင် ဘုန်းကြီးတွေကို သတ်တာအားပေးတဲ့ အရေးအသားတွေ၊ နအဖကို ဖားတဲ့ စကားလုံးတွေရေးခဲ့ကျပါတယ်။ သူတို့ဒီမိုကရေစီဆီပုံး တစ်ခုမှာ အချင်းချင်းဘာပြောလဲဆိုရင် အဲဒါ “စိတ်ဓါတ်စစ်ဆင်ရေးလုပ်တာတဲ့” ။ ဘာစိတ်ဓါတ်စစ်ဆင်ရေးလဲ? အဲလို အောက်တန်းစားအလုပ်လုပ်တာ ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုလားလို့ ပြန်ပြီးမေးချင်ပါတယ်။ အဲလိုမျိုးလုပ်တာကို ဒီမိုကရေစီသမားတွေဖြစ်တဲ့ အစ်ကို “x” နဲ့ အစ်ကို “စိတ်” တို့က တတ်နိုင်တရွေ့တော့ တားပေးခဲ့တာမျိုးတွေ ရှိပါတယ်။ ဒီနှစ်ယောက်ပါပဲ။ တခြား ဒီမိုကရေစီသမားတွေကတော့ လက်ပိုက်ကြည့်နေခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီလို မိမိနဲ့ဝါဒတူတွေလုပ်ရပ်ကို လက်ပိုက်ကြည့်နေတယ်ဆိုရင် တာဝန်မဲ့ရာ ရောက်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ဆီမှာ ခွေးပိုင်ရှင်တွေဟာ လမ်းပေါ်မှာ သူတို့ခွေးတွေ ယိုသွားတဲ့ ခွေးချေးကို ကိုယ်တိုင်ကျုံးပြီး အမှိုက်ပုံးထဲ သွားထည့်ရပါတယ်။ တနည်းပြောရရင် ကိုကြိုက်လို့ မွေးထားတဲ့ ခွေးကြောင့် တခြားသူတွေကို မထိခိုက်အောင် တာဝန်ယူရတယ်ဆိုတဲ့သဘောပါ။ လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်တော့ ရအောင်ကြိုးစားနေကျပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဆဲဆိုနေတာကို လက်ပိုက်ကြည့်နေရင် ဒီလူတွေဟာ လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်နဲ့ ထိုက်တန်သလား? ထိုက်တန်သလား? ဖြေရဲလားခင်ဗျာ ?
သာမန်လူတွေ အနေနဲ့ ကြည့်ရင် မဆဲဆိုပဲ ပြောဆိုရင် ပြဿနာမရှိဘူးလို့ မြင်မှာပါ။ မဟုတ်သေးပါဘူး။ လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုခွင့်လိုချင်သူများရဲ့ တာဝန်ဟာ အဲလောက် မသေးပါဘူး။
နအဖကို ဝေဖန်တဲ့နေရာမှာ စည်းကမ်းရှိသင့်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် အဲဒီလုပ်ရပ်ဟာ တိုင်းပြည်ကို အများကြီးထိခိုက်နိုင်ပါတယ်။ သတင်းဌာနတွေနဲ့ ဘလော့သမားတွေဟာ အချိန်ပြည့် နအဖ လုပ်ရပ်ကို အပျက်ပဲ ပြောနေကျပါတယ်။ (သတင်းလိမ်တွေနဲ့ တိုင်းပြည် သိက္ခာချတာနဲ့ တိုင်းပြည် ပြိုကွဲအောင် လုပ်နေတာတွေကို မကြာမီတင်ပြပါမယ် ) တကယ်မကောင်းလို့ မကောင်းဘူးပြောတာ ဘာဖြစ်လဲလို့ ပြန်မေးလို့ရပါတယ်။ ဥပမာ တစ်ခုပြောကြည့်ပါမယ်။ နအဖ ပညာရေးစံနစ် မကောင်းဘူး၊ ဘယ်လိုညံ့တယ်၊ ဆရာတွေ ဘယ်လို အကျင့်ပျက်တယ် စသဖြင့် ဝေဖန်ကျပါတယ်။ ပြီးတော့ အနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့ တခြားနိုင်ငံတွေမှာ ပညာရေး ဘယ်လောက် ကောင်းမွန်တဲ့ အကြောင်း ဘက်ပေါင်းစုံကနေ ချီးကျူးလိုက်ပါသေးတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာ ရှိနေတဲ့ လူငယ်တွေ နေရာကနေ ခံစားကြည့်ပါ။
မြန်မာလူငယ် တွေဟာ နိုင်ငံခြားမှာ ပညာထွက်မသင်နိုင် ရှာပါဘူး။ သူတို့ သင်နိုင်တာ နအဖ ပညာရေးလေး တစ်ခုပါ။ အဲဒါလေးကို ရစရာမရှိအောင် ဝေဖန်တော့ ဘာဖြစ်လဲ? မြန်မာလူငယ်တွေဟာ မိမိကိုယ်ကို အမှောင်ထုကြီးထဲမှာ ရောက်နေတဲ့ လူတစ်ယောက်လို ခံစားလာရပါတယ်။ စိတ်ဓါတ်တွေ ကျလာပါတယ်။ လူငယ်တစ်ယောက်ရှိရမယ့် ကြိုးစားလုပ်ဆောင်ချင်တဲ့ စိတ်ဓါတ်တွေလဲ ချို့တဲ့လာပါတယ်။ ဒီတော့ လမ်းပျောက်နေတဲ့ လူငယ်တွေဟာ စိတ်တွေလေပြီး ပညာရေးကို ဆုံးခန်းတိုင်အောင် သင်ချင်တဲ့ သူ မရှိသလောက်နည်းသွားပါတယ်။ တစ်ခု သတိထားဖို့ကတော့ ဘယ်ပညာရေးမဆို အနည်းနဲ့အများ လူကို အကျိုးပြုပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံမှာ သင်ပေးတဲ့ အင်ဂျင်နီယာပညာနဲ့ နအဖ သင်ပေးတဲ့ အင်ဂျင်နီယာ အဆင့်အနိမ့်အမြင့်ပဲကွာပါတယ်။ နအဖပေးတဲ့ဘွဲ့နဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမပြုနိုင်ရင်တောင် အထက်တန်း မအောင်တဲ့ သူထက်တော့ ပိုပြီး အသိဥာဏ်ရင့်ကျက် ပါတယ်။ မိမိကိုယ်ကိုလဲ ယုံကြည်မှု ရှိလာစေပါတယ်။ ကိုယ်ရည် ကိုယ်သွေးလဲ မြင့်လာစေပါတယ်။
ဒါဆိုရင် လုံးဝ မဝေဖန်နဲ့ ဆိုတဲ့ သဘောလားလို့ မေးလို့ရပါတယ်။ အခုဒီမိုကရေစီ ဘလော့တွေနဲ့ ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံရေးသမားတွေ လုပ်နေတာ အတင်းထိုင်တုတ်တဲ့ အဆင့်ပါ။ အတင်းထိုင်တုတ်တဲ့ အဆင့်လို့ ရေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ သတိမထားမိပဲ ဖြစ်နေမှာ ဆိုးလို့ ထပ်ရေးလိုက်ပါတယ်။ အပျက်သဘောကိုပဲ ရှာပြီး အတင်းတုတ်နေကြတာပါ။ အထူးသဖြင့် စာသားကောင်းကောင်းလေးရှာပြီး အတင်းတုတ်နိုင်ရင် အားလုံးက ၀ိုင်းပြီး ချီးကျူးကျတယ် မဟုတ်လားခင်ဗျာ။ အတင်းပြောတာနဲ့ ဝေဖန်တာ ဘာကွာလဲ ဆိုရင် အတင်းပြောသူရဲ့ စိတ်ထဲမှာ တစ်ဖက်လူ ဒုက္ခရောက်ပါစေ၊ တဖက်အဖွဲ့အစည်း အရှက်ရပါစေ ဆိုတဲ့ စိတ်ရင်းနဲ့ ပြောဆိုချင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဝေဖန်တာကျတော့ သူပြောတဲ့ စကားရဲ့ အကျိုးသက်ရောက်မှုကို သတိထားပါတယ်။ အထက်က တင်ပြခဲ့သလိုပဲ လူငယ်တွေ ဘ၀ကို ဖျက်ဆီးသလိုဖြစ်မဲ့ အရေးကို ဝေဖန်သူတွေကတော့ သတိထားမိကျမှာပါ။ ဒါ့ကြောင့် ဝေဖန်သူတွေအနေနဲ့ အတင်းပြောတယ် မဖြစ်ရအောင် နအဖ ညံ့ဖျင်းလို့ ဒီလိုတော့ ဖြစ်နေတယ်၊ ဒါလေးတွေ လုပ်ပြီး မိမိဘ၀ကို မြှင့်တင်ပါလို့ အကြံပြုချက်ပါ ထည့်သွင်းသင့်ပါတယ်။ ဥပမာ ဆရာတွေ စာကောင်းကောင်းမသင်ဘူး လို့ပဲ အတင်းထိုင်တုတ်မယ့်အစား ။ သူငယ်ချင်းတွေ အချင်းချင်း တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ပညာရေး ဖလှယ်တာမျိုးလေးတွေ လုပ်ကျပါ။ မိမိသိထားတာကို သဘောထားကြီးကြီးနဲ့ သူငယ်ချင်း အချင်းချင်းမျှဝေပါ ဆိုတာမျိုးပေါ့။ ပညာရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အင်တာနက် ၀က်ဆိုက်တွေကို နအဖ ဘန်းထားတယ်။ ဒီတော့ အဲဒီဝက်ဆိုက် အချက်အလက်တွေကို စီဒီနဲ့ ရအောင်ယူပြီး အချင်းချင်း ဖြန့်ဝေကျပါ ဆိုတာမျိုး။ အဲလိုမျိုး အကြံလေးတွေလည်း ပူးတွဲတင်ပြသင့်ပါတယ်။ ဘာအကြံမှ မပေးနိုင်ပဲ အပျက်ပြောယုံသက်သက်ဆိုရင် အဲလိုလူတွေကို လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်နဲ့ ထိုက်တယ်လို့ ပြောလို့ရသလား? ဖြေရဲရင် ဖြေကြည့်ပါခင်ဗျာ
စနေနေ့က ထင်ပါတယ်။ DVB သတင်း ဌာနကနေ ဒီမိုကရေစီသမားတွေကို
နအဖနဲ့ NLD ဆွေးနွေးပွဲ ပေါ်မှာ ထင်မြင်ချက် လေးတွေ အင်တာဗျူးလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီသမားတွေပီပီ စကားပြောတဲ့ အသံလေးကတော့ လေးစားဖို့ကောင်းပါတယ်။ (ဒါလေးပဲ သူတို့ လုပ်တတ်တာ မဟုတ်လားခင်ဗျာ?) ဒါပေမယ့် ပြောတဲ့ စကားလုံးကတော့ ဥာဏ်မရှိတာ သိသာနေပါတယ်ခင်ဗျာ။ သူတို့ဘာပြောလဲဆိုရင် NLD အနေနဲ့ နအဖကို သတိထားဖို့လိုတယ်တဲ့ ။ နောက်တယောက်လဲ အဲဒါပဲ ထပ်ပြောပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ NLD နေရာကနေ စဉ်းစားကြည့်ပါ။ NLD အနေနဲ့ သတိထားရမယ်ဆိုတာ သိပါတယ်။ အရမ်းလဲ ခက်ခဲတဲ့ ဆွေးနွေးပွဲဆိုတာလဲ အားလုံးလဲသဘောပေါက်မှာပါ။
မြန်မာနိုင်ငံအနာဂါတ်အတွက်လဲ အရေးကြီးပါတယ်။ NLD ဟာ နအဖ တောင်းဆိုချက် အများစုကို လိုက်လျောမိလိုက်ရင်လည်း ဒီမိုကရေစီသမားတွေဘက်က ဝေဖန်ခံရမယ့် အရေးရှိနေတယ် မဟုတ်လား? ဒီမိုကရေစီသမားတွေ လုပ်တတ်တာ အပြစ်တင်ဖို့ တခုပါပဲ။ တကယ်လို့ နအဖ တောင်းဆိုချက်တွေကို မလိုက်လျောခဲ့ရင်လည်း နအဖအနေနဲ့ ဆွေးနွေးပွဲကို ဖျက်သိမ်းပြီး သူလုပ်ချင်သလို ဆက်လုပ်သွားနိုင်ပါတယ်။ NLD အနေနဲ့ နှစ်လမ်းပဲရှိပါတယ်။ နအဖ ဆီကနေ နည်းနည်းလေးရလာတဲ့ အကျိုးအမြတ်လေးကို ဖြစ်ညှစ်ယူမလား? အဲဒါဆိုရင် တဖက်က သူတို့ ဒီမိုကရေစီ သမားတွေက ဆန့်ကျင်မှုနဲ့ ဝေဖန်မှုအောက်မှာ NLD နိဂုံး ချုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါမှ မဟုတ် နအဖ တောင်းဆိုချက် အများစုကို ပယ်ချမယ်ဆိုရင်လဲ ဘာမှ မရပဲ အလကား အချိန်ကုန်ပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နေအိမ်ထဲ ပြန်အောင်းရမယ့် အရေးပါ။ ဒီတော့ NLD အနေနဲ့ ပါတီအပျက်ခံမလား? ဒါမှ မဟုတ် နအဖနဲ့ ဆွေးနွေးပွဲကို ဖျက်ပြီး နောက် နှစ် ၂၀ မှာ ပေါ်လာမယ့် လူထုအုံကြွမှုကြီးကိုပဲ ထိုင်စောင့်မလား?
လက်တွေ့ကျကျ ပြောရမယ်ဆိုရင် NLD ကို သတိထားပါလို့ ဆရာကြီးလေသံနဲ့ ပြောနေမယ့် အစား နအဖက ဖြင့် ဘယ်လို တောင်းဆိုနိုင်တယ်၊ ဒါဆိုရင် NLD အနေနဲ့ ဘယ်လို တုံ့ပြန်သင့်တယ်။ ဘယ်လိုနည်း နဲ့ နအဖကို နားချသင့်တယ် စသဖြင့် အကြံပြုတာက ပိုပြီးသင့်တော်ပါတယ်။ အဲလိုမှ မဟုတ်ရင် သူတို့ဟာ ပါးစပ်သမားတွေ ပဲဖြစ်နေမှာပေါ့ဗျာ။ သေချာတာကတော့ ဒီမိုကရေစီသမားတွေဟာ လက်တွေ့ကျကျ အကြံပြုဖို့ ဥာဏ်အရည်အချင်းမရှိပါ ခင်ဗျာ။ တကယ်လို့ ဒီဆွေးနွေးပွဲ ပျက်ခဲ့ရင် နအဖကို အပြစ်တင်တဲ့ လေသံတွေပဲ ထွက်လာမှာပါ။ မယုံရင် စောင့်ကြည့်ပါ။ ဆန်ကုန်ခံပြီး ဗေဒင် မေးဖို့ မလိုပါခင်ဗျာ။
ဒီမိုကရေစီသမားတွေဟာ ကိုယ်ချင်းစာ တရားလေးကို ထားတပ်ဖို့လိုအပ်နေပါတယ်။ နအဖကို မိမိနဲ့ ၀ါဒမတူလို့ အတင်းပြောနေတာဟာ အဆင့်အတန်းရှိတဲ့ လုပ်ရပ်မဟုတ်ပါခင်ဗျာ။ ကိုယ်တိုင်ကျတော့ (ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့တွေ) လူမှုရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘာမှလုပ်တာ မရှိပါ။ MMEd ဘလော့မှာ ထိုင်းရဲတွေ မြန်မာလူမျိုးတွေကို မတရားပြုကျင့်တဲ့အကြောင်း မတင်ပြဖို့တောင် တောင်းဆိုတဲ့သူရှိနေပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီ ၀ါဒကိုပဲ စိတ်ဝင်စားပါတဲ့။ စဉ်းစားကြည့်ပါဦးဗျာ။
ဒါကြောင့် ဘာတွေ ပျက်နေတယ်ဆိုတာ ချည်းပဲ အတင်းထိုင်တုတ်နေတာဟာ မှန်ကန်သော လုပ်ရပ် မဟုတ်ပါ။ ထို့အတူပဲ နအဖ တစ်ခုတည်းကိုပဲ ကြည့်ပြီး လုပ်ကိုင်နေတာ တွေဟာလည်း အရမ်းကို တာဝန်မဲ့ပါတယ်။ သူတို့တွေဟာ မိမိဝေဖန်မှုတွေ ၊ လှုပ်ရှားမှုတွေ နောက်ကွယ်မှာ ခံစားရတဲ့ လူထုကို အမြဲမေ့ထားပါတယ်။ လူထုခမျာ နအဖနဲ့ ဒီမိုကရေစီသမားတွေရဲ့ ကိုယ် စိတ်နှစ်ပါး ဒုက္ခပေးတဲ့ ပုံစံအမျိုးမျိုးကို ခံစားနေရပါတယ်။
အခု NLD ကိစ္စမှာလဲပဲ NLD နေရာကနေ ဘယ်လိုအကျပ်အတည်း ဖြစ်နေလဲ ခံစားပါ။ သူတို့နေရာကနေပြီး စဉ်းစားပါ။ လက်တွေ့ကျကျ အကြံပေးပါ။ အကြံမပေးနိုင်ရင် ဆရာကြီးလေသံနဲ့ သြ၀ါဒ မပေးပါနဲ့။ အဲဒါဟာ အကျိုးမရှိတဲ့ အပြင် အကျိုးတောင် ယုတ်ပါတယ်။ ဒီတော့ ကိုယ်ချင်းစာနာတတ်တဲ့ စိတ်ဓါတ်လေးကို ဒီမိုကရေစီသမားတွေ ထားတတ်အောင် အရင်ကြိုးစားပါ။ ပြီးမှ ဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲကို ဆက်လက်ဆင်နွဲပါ။ Martin Luther King ဟာ အဖြူတွေရဲ့ လူမျိုးရေးခွဲခြားတဲ့ စိတ်ဓါတ်ကို မပြောင်းသေးခင် သူ့မှာရှိနေတဲ့ အဖြူတွေကို မုံန်းတီးတဲ့ စိတ်ကို အရင်ပြုပြင် ခဲ့ပါတယ်။ ဘာမဟုတ်တဲ့ စိတ်ဓါတ်တွေ အတုခိုးမယ့်အစား Martin Luther King လို စိတ်ဓါတ်ကို အတုယူလိုက်ပါ။ တိုင်းပြည်ကို နည်းနည်းလေး ချစ်တယ်ဆိုရင်ပေါ့။ စိတ်မဆိုးကြေး
Posted by * In Search of Truth * at 12:19 PM 16 comments Links to this post
အရင်အပတ်က ကျနော်တို့ နှစ်ယောက် အမေရိကမှာ ရှိတဲ့ အစ်ကိုမောင်ဆန်ရဲ့ ဦးလေးအလှူကိစ္စကို ကူညီဖို့ ရောက်သွားခဲ့တယ်ဗျ။ အလှူမှာ တိုက်ဆိုင်မှုလို့ပဲ ပြောမလား မသိပါဘူးခင်ဗျာ။ ဒီမိုကရေစီသမား ၃-၄ ယောက်လောက် စုပြီး နိုင်ငံရေးအကြောင်း ဆွေးနွေးနေတာကို ဘေးကနေကြားရင်း ကျနော်တို့ နှစ်ယောက် တကယ်ကို အူလိုက် ဖားလိုက် ရယ်ခဲ့ရပါတယ်။ ဒီပြန်ရောက်တော့ comment တွေဖတ်ကြည့်တော့ တကယ်ကို ရယ်ရတဲ့ comment လေး တစ်ခုကို တွေ့မိပြန်ရောဗျာ။ ကျနော်မှ မဟုတ်ပါဘူး။ အားလုံးလဲ ကျနော်တို့လိုပဲ ဟားတိုက်မှာ သေချာပါတယ်ခင်ဗျာ။ သူတို့ပြောတာတွေက သွားတူနေပါတယ်။ ဘာပြောကျလဲဆိုရင် နအဖ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဖမ်းထားလို့ ဆန္ဒပြပွဲ အခုလိုဖြစ်သွားတာဆိုပဲ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သာ အပြင်မှာ ရှိနေရင် အောင်မြင်မှာတဲ့ဗျာ။ ဟား ဟား . .. တကယ်ကို ရယ်တယ်ဗျာ။ သူတို့ပြောပုံစဉ်းစားကြည့်ပါဗျာ။ နအဖကပဲ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဆန္ဒပြပွဲ အဆင်ပြေပြေဦးဆောင်နိုင်အောင် လွှတ်ပေးရမလိုဖြစ်နေတယ်။ အဲလို မလွှတ်တရွေ့ ဒီမိုကရေစီ မရတော့ဘူးဆိုတဲ့ သဘောပဲဗျ။ ဒါဆိုရင်လည်း နအဖ က ထိမ်းထားရင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သေသွားရင် ဒီမိုကရေစီဆက်မလုပ်နိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့ သဘောပဲဗျ။ အဲလောက်အတွေးချောင်တဲ့ ဒီမိုကရေစီသမားတွေပါဗျာ။
ဒီနေ့တော့ ထပ်ခါတလဲ ပြောပြောနေရတဲ့ စကားကို ပြန်ပြောပါမယ်။ ကျနော်တို့ နှစ်ယောက်မှာ ၀ါဒအစွဲမရှိပါဘူးခင်ဗျာ။ ကျနော်တို့ ဘလော့မှာ နအဖကို တကြိမ်မှ ကောင်းတယ် မပြောခဲ့ပါ။ ဆီပုံးထဲမှာ နအဖတည်မြဲပါစေလို့ ဇော်မျိုးနာမည်နဲ့ ရေးထားတာလဲ ကျနော် မဟုတ်ပါ။ ဒီမိုကရေစီကိုလည်း ဘယ်တုံးကမှ ကောင်းတယ်လို့ မပြောခဲ့ပါ။ အကြောင်းကတော့ နှစ်ခုစလုံးဟာ အဏာရူးတွေနဲ့ ဥစ္စာရူးတွေမို့ပါခင်ဗျာ။ (နအဖကို မဝေဖန်တာကို လာမပြောပါနဲ့ခင်ဗျာ၊ နအဖကို ဝေဖန်တဲ့ ဘလော့တွေနဲ့ သတင်းဌာနတွေ သောင်းနဲ့ ချီပြီးရှိနေပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီကို ဝေဖန်တဲ့ ဘလော့ လုံးဝမရှိပါ။ ကျနော်တို့က ဝေဖန်တယ်၊ အကြံပြုတယ် ။ လက်တွေ့ကျကျ တွေးခေါ်တတ်အောင် လုပ်ပါတယ်) နှစ်ဖက်စလုံးဟာ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ မြန်မာလူမျိုးတွေ အတွက် လုပ်နေတာ မဟုတ်ပါ။ ပါးစပ်နဲ့ပဲ တိုင်းပြည်ကိုချစ်နေပြီး လက်တွေ့မှာတော့ တိုင်းပြည်ကို ဖျက်ဆီးနေကျပါတယ်။ ကျနော်တို့ နအဖ ပြုတ်ကျဖို့ ကြိုးစားတဲ့အချိန်ကတည်းက အတိအလင်းပြောခဲ့ပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီကို လိုလားလို့ နအဖ ပြုတ်ကျရေးကို လုပ်တာ မဟုတ်ပါ။ တိုင်းပြည် စီးပွားရေးအတွက်လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တချို့လူတွေက ဒီမိုကရေစီဘက်ကို ကူးသွားချင်းဖြစ်တယ်လို့ တွက်ထားခဲ့ပုံ ပေါ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ အသေအခြာထပ်ပြောပါမယ်ခင်ဗျာ။ ကျနော်တို့ နှစ်ယောက်စလုံး က မြန်မာနိုင်ငံ ဘက်ကပါ။ မြန်မာပြည်အတွက် အကျိုးရှိမယ်ဆိုရင် နအဖကိုလည်းဖြုတ်ချပါမယ်၊ ဒီမိုကရေစီကိုလည်းဖြုတ်ချပါမယ်။ လိုအပ်ရင် နအဖကိုလည်း အကြံပြုပါမယ်၊ ဒီမိုကရေစီကိုလည်း အကြံပြုပါမယ်။
နောက်တစ်ခုက နအဖဟာ မြန်မာလူမျိုးပါ။ မြန်မာလူမျိုးအချင်းချင်း အမှန်တကယ် ရက်စက်တယ်ဆိုရင်တော့ မလွှဲသာလို့ အပြောခံပါမယ်။ တကယ်လက်တွေ့မှာ အစိုးရ တစ်ခုအနေနဲ့ အမေရိကန်နဲ့ အင်္ဂလန်အစိုးရတွေနဲ့ ယဉ်ကြည့်ရင် အများကြီး ညှင်သာပါတယ်။ စီးပွားရေးမတိုးတက်တာက တခြားအကြောင်းပါ။ ဒါပေမယ့် ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့တွေရဲ့ နိုင်ငံရေးအကျိုးအမြတ်နဲ့ ပိုက်ဆံ ရဖို့ ချဲ့ကားပြောနေတာတွေဟာ တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုးရဲ့ သိက္ခာကို ကျဆင်းစေပါတယ်။ ထို့အပြင် မိမိမြန်မာလူမျိုးဖြစ်ရတာကို လည်း သိမ်ငယ်စရာလို့ ယူဆလာနိုင်ပါတယ်။ ဒီဘက်မှာဆိုရင် မြန်မာမိန်းခလေးတွေက တခြားလူမျိုးနဲ့ ယူမှ ဂုဏ်ရှိတယ်လို့ ယူဆလာနေပါပြီ။ အဖြူတွေ လုပ်သမျှအားလုံးကို အတုယူပါတယ်။ အိမ်ထောင်ရေးဖေါက်ပြန်တာတွေလည်း ဒီမိုကရေစီ လုပ်တဲ့သူတွေ အသိုင်းအ၀န်းမှာ မြင်တွေ့နေရပါတယ်။ အခုဆိုမြန်မာနိုင်ငံအထဲ အထိ ရောက်နေပါတယ်။ ကိုယ့်လူမျိုးကို သိမ်ငယ်တယ်လို့ ထင်နေတရွေ့ ကျနော်တို့တွေရဲ့ ကောင်းတဲ့ ရိုးရာ အစဉ်အလာတွေကို ဖျက်ဆီးပြီး တခြားလူမျိုးတွေရဲ့ ယဉ်ကျေးမှု ကျွန် ဖြစ်ရမှာသေချာပါတယ်။ ဒါတွေကြောင့် နအဖ အတွက် အမှန်အတိုင်း ရပ်တည်ပေးနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အခှုဆန္ဒပြပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီး အချိန်ကုန်ဝေဖန်ပေးနေတာလဲ အကြောင်းရှိပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီသမားတွေဟာ နအဖလိုပဲ မြန်မာလူမျိုးတွေပါ။ ( မြန်မာလူမျိုးဆိုတာ မြန်မာပြည်မှာ မွေးတဲ့ တရုပ်၊ကုလား၊ တိုင်းရင်းသား အားလုံးကို ရည်ရွယ်ပါတယ်) သူတို့တွေဟာ အလုပ်လဲ မလုပ်တတ်ကျပါဘူး။ အချိန်ပြည့် စိတ်ကူးယဉ်တယ်၊ အရည်မရ အဖတ်မရ ပြောတယ်။ ဆဲဆိုတယ်၊ အဆင့်ရှိရှိ မဆွေးနွေးတတ်ပါဘူး။ အဲဒါ အကျင့်ဆိုးကြီးပါခင်ဗျာ။ အဲဒီအကျင့်ဆိုးတွေကို သိအောင် ဖေါ်ထုတ်တဲ့အနေနဲ့ အခုလိုဝေဖန်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ (တဖြေးဖြေး လက်တွေ့ကျကျ တွေးခေါ်သင့်တယ်ဆိုတာ သဘောပေါက်လာကျပါပြီ။ ဒါလဲ လူအနည်းစုပါ) နောက်တစ်ချက်ကတော့ နအဖ အမှန်တကယ် ဆင်းသင့်ပြီ ထင်ပါတယ်။ အဲဒီလို ဆင်းသွားမှ တိုင်းပြည်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ စီးပွားရေး အခက်အခဲတွေ ပြေလည်လာမယ်လို့လဲ မျှော်လင့်ပါတယ်။ မြန်မာတွေ အလုပ်ကို မှန်ကန်စွာ လုပ်တတ်ဖို့နဲ့ တိုင်းပြည်အတွက် အကျိုးရှိမယ်ထင်လို့ လုပ်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်
နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ သူတို့ ဒီမိုကရေစီ ၀က်ဆိုက်တွေနဲ့ ဘလော့တွေ လုပ်ကိုင်ပုံက နအဖ သတင်းစာနဲ့ ပုံစံတူနေလို့ပါ။ သူတို့ဘာတွေ လုပ်လဲ တစ်ချက်ကြည့်ပါခင်ဗျာ။ နအဖကို ဆန့်ကျင်တဲ့ အလုပ်လို့သာ ခေါင်းစဉ်တပ်လိုက် အားလုံးထောက်ခံကျပါတယ်။ သတင်း၊ ဆောင်းပါးတွေမှာ နအဖ ဆိုးတယ်လို့ ပြောသမျှ ထောက်ခံ ယုံကြည်မယ်။ ဘယ်သူမှ အကျိုးသင့်အကြောင်းသင့်ဆွေးနွေးတာ မရှိကျပါဘူး။ ဝေဖန်လဲ မဝေဖန်ရဲကျပါဘူး။ ဝေဖန်ဖို့ ဥာဏ်မရှိတာလဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် ဒီမိုကရေစီသမားတွေဟာ ဆိုက်ဝါးတွေ မိနေလို့ပါ။ သူတို့ ဦးနောက်တွေရဲ့ အဆင့်အတန်းဟာ သာမန်လူထက် နိမ့်နေပါတယ်။ (ကျနော်တို့ အခုလိုပြောတာ ရိုင်းတယ်ဆိုတာ သိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ချိုချိုသာသာ ပြောနေရင် ဒီမိုကရေစီသမားတွေ ခေါင်းထဲ ၀င်မှာ မဟုတ်လို့ ပါ။ နောင်မှာလဲ စဉ်းစားဖို့ တွန်းအားပေးသလို ဖြစ်လာမယ်လို့ ထင်မြင်ယူဆပါတယ် ) သတင်းဌာန အမည်ခံပြီးတွေ့ကရာ ဇတ်လမ်းရေးပါ။ သူတို့အားလုံးယုံပါတယ်။ ဘုန်းကြီးအလောင်းအတုတွေ ဦးနောက်ထွက်နေတဲ့ ပုံတွေအတုတွေ သူတို့ ဘလော့တွေနဲ့ ၀က်ဆိုက်တွေမှာ တင်ခဲ့တာ လူတိုင်းသိပါတယ်။
အခုဝေဖန်ချင်တာကတော့ မြန်မာဒီမိုကရေစီအဖွဲ့တွေဟာ သွေးပျက်နေတယ်လို့ ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဆီပုံးတွေ၊ ဘလော့တွေနဲ့ ၀က်ဆိုက်တွေကို လေ့လာရင် လူတိုင်းမြင်နိုင်ပါတယ်။ သူတို့တွေဟာ နအဖ ပြုတ်ကျဖို့ အရမ်းကို လိုလားနေကျပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ဘယ်လို ဘယ်ပုံစဉ်းစားရမှန်း မသိရှာကျပါဘူး။ မြန်မာပြည်က လူတွေ နအဖကို မကျေနပ်လို့ ဆန္ဒပြလာမယ့် အရေးကိုပဲ ထိုင်စောင့်နေကျတာပါ။ အဲလိုဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာ လက်ခုပ်တီးအားပေးမယ်။ ကျန်တဲ့အချိန်မှာ နအဖအတင်း ထိုင်တုတ်မယ်။ ဒါပါပဲ။ လက်တွေ့ကျတဲ့ စဉ်းစားတွေးခေါ်မှု မရှိပါ။
၀ိုင်းဝန်း ဆွေးနွေးပြီး အဖြေရှာလား ဆိုတော့လည်း အဲလို မရှိပြန်ပါဘူး။ နအဖ ဆန့်ကျင်တဲ့ လှုပ်ရှားမှု မှန်သမျှ ထောက်ခံမယ်ဆိုတာ ချည်းပဲ။ အောက်ခံဘောင်းဘီပို့တယ်။ မိန်းခလေးတွေက အစ ထောက်ခံနေကျပါတယ်။ သူတို့မှာ မြန်မာမိန်းခလေးဖြစ်တာတောင် မေ့နေတဲ့ အနေအထားပါ။ အခုလည်း အရင်လုပ်ခဲ့တဲ့ လမ်းဟောင်းအတိုင်း နအဖကို စီးပွားရေးပိတ်ဆို့ဖို့ တွန်းအားပေးနေပါတယ်။ နအဖလို့သာ ခေါင်းစဉ်တပ်ပေမယ့် ပြည်သူတွေကို တိုက်ရိုက်ထိခိုက်တာတော့ အမှန်ပါ။ စင်ကာပူက ဘဏ်တစ်ခုဆိုရင် မြန်မာတွေ ငွေအပ်တာကို လက်မခံတော့ဘူးလို့တောင် သတင်းကြားနေပါတယ်။ အဲဒါမှန်ခဲ့ရင် စင်ကာပူက မြန်မာတွေရဲ့ လူထုချဉ်ဖတ်စာရင်းထဲမှာ ဒီမိုကရေစီသမားတွေ ထိပ်ဆုံးက ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ နှစ်ယောက် ကတော့ စီးပွားရေးသပိတ်မှောက်အောင် တိုက်တွန်းနေတဲ့ နိုင်ငံရေးသမားတွေလိုပဲ ဒီက ပတ်စပို့ကိုင်ထားတဲ့သူတွေဆိုတော့ အေးအေးဆေးဆေးပါ။ လောကကြီးကတော့ ဆက်လက် သာယာနေပါတယ်။
ကို ဥတ္တရကတော့ အဖွဲ့တွေကြား စကားပြောနေတယ်လို့တော့ ပြောပါတယ်။ ထုံးဆန်အတိုင်း မခံချင်စိတ်နဲ့ အနိုင်ရအောင် ပြောတယ်ဆိုတာ သိပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီသမားတွေဟာ အဖြူတွေ ပြောသမျှကိုပဲ လေးစားပြီး ကိုယ့်မြန်မာအချင်းချင်းဆိုရင် အထင်မကြီးကျပါဘူး။ ဒါကြောင့် ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့တွေ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီး လက်တွေ့ကျတဲ့ နအဖ ပြုတ်ကျရေးလမ်းစဉ်ကို ချမှတ်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါ။ (ဥာဏ်အရည်အချင်းလဲ ရှိမယ် မထင်ပါ) အရင် နှစ် ၂၀ လုံးလုံး လုပ်ခဲ့တဲ့ လမ်းဟောင်းအတိုင်း ဆက်လျှောက်မယ်ဆိုတာ အတိအကျ ပြောနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
သူတို့မှာ အဖွဲ့အစည်းနဲ့ လုပ်ကိုင်နိုင်တဲ့ အကျင့်တွေ မရှိကျပါဘူး။ ဆန္ဒပြပွဲဖြစ်တုံးက သတိရမယ်ထင်ပါတယ်။ နအဖ ထိပ်ပိုင်းမှာ အကွဲအပြဲဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ အချိန်တုံးက သူတို့လေးတွေ သိပ်ပြီးပျော်နေကျပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ NLD ဟာ ကစဉ့်ကလျားဖြစ်နေပါတယ်။ အပေါ်ပိုင်းက ဆန္ဒပြပွဲ မထောက်ခံဘူးလို့ ပြောပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အောက်ခြေအဆင့်က ထွက်ပြီးဆန္ဒပြကျပါတယ်။ အဖွဲ့ဝင်ဆိုတာ အဖွဲ့အစည်းရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်း နာခံရပါမယ်။ အဲလိုမနာခံတဲ့သူတွေကို လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ကြိုဆိုကျတယ် မဟုတ်လားဗျာ? တနည်း NLD ကွဲပြဲတာကို အားပေးနေသလို ဖြစ်နေပါတယ်။ အဲဒီလူတွေ မိမိကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ လုပ်ချင်ရင် အဖွဲ့အစည်းထဲ ၀င်ဖို့မလိုပါ။ နအဖတပ်တွင်း အကွဲအပြဲဖြစ်တယ်ဆိုတာ နှစ်ပေါင်း ၂၀ လုံးလုံးရှိပါတယ်။ ဒီနေ့အထိ ပန်းပန်လျက်ပါ။ စည်းရုံးပြီး မျိုးချစ်စိတ်ရှိပါတယ်လို့ ဂုဏ်တင်ခံနေရတဲ့ ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့တွေ ဒီနေ့အထိ နအဖ ပြုတ်ကျရေးလမ်းစဉ် မရေးဆွဲနိုင်သေးပါ။ ရေဒီယိုပေါ်မှာ ဟန်ကြီး တခွဲသားနဲ့ လေကန်တာက လွဲလို့ ဘာမှ မလုပ်တတ်ကျပါ။
ဒီတော့ နောက်တကြိမ် နအဖ ဓါတ်ဆီဈေး ၅ ဆ တက်ပေးတဲ့ အချိန်ကို ထိုင်စောင့်ကျပါဦးခင်ဗျာ။ စိတ်မဆိုးကြေး
Posted by * In Search of Truth * at 8:13 PM 21 comments Links to this post
Posted by * In Search of Truth * at 10:53 PM 20 comments Links to this post
Thomas Jefferson ဆေးရုံမှ တရားပြသင်တန်း
ဒီတခါတင်ပြမယ့်အကြောင်းကတော့ အမေရိကန်မှ Thomas Jefferson ဆေးရုံရဲ့ ၀ိပဿနာသင်တန်း ကြော်ငြာလေးပါ။ သင်တန်းကာလကတော့ ၂ လကြာမြင့်ပါတယ်။ အကြေးငွေအဖြစ် $495 ယူပါတယ်။ တရားစခန်းဝင်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ သင်ပေးတာမဟုတ်ပဲ တပတ်နှစ်ကြိမ် တရားထိုင်နည်းကို သင်ပြသပေးတာဖြစ်ပါတယ်။
ဆီပုံးမှာ Mindfulness ဟာ သမထကို ရည်ညွှန်းတယ်ဆိုပြီး ပြောတဲ့ သူတစ်ယောက်နဲ့ တွေ့ခဲ့ပါတယ်။ သူက ၀ိပဿနာဟာ နိဗာန် အတွက်ပဲ ဖြစ်လို့ အနောက်နိုင်ငံသားတွေ လုပ်တာ သမထပဲ ဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်း ပြောခဲ့ပါတယ်။ ဒီမှာ မြန်မာတွေ မှားယွင်းနေတဲ့အချက် ကိုကျနော် ပြောချင်ပါတယ်။ တရားတော်ဟာ မျက်မှောက်ဘ၀မှာလည်း အကျိုးပြုတယ်ဆိုတာ မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင် ဟောကြားခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ၀ိပဿနာကို ကျနော်တို့ ဗုဒ္ဓဘာသာတွေဟာ နိဗာန် ရည်မျှော်ပြီးလုပ်တာ မှန်ပေမယ့်၊ လက်ရှိဘ၀ မှာလည်း အကျိုးထူးတွေ ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၀ိပဿနာကို Vipassana Meditation , Insight Meditation နဲ့ Mindfulness Meditation စသဖြင့်အမျိုးမျိုးခေါ်ဝေါ်ကျပါတယ်။ ဘာသာရေးနဲ့ တတ်နိုင်သမျှ ကင်းရှင်းအောင် လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့မူနဲ့ အညီ ဆေးရုံတွေနဲ့ တက္ကသိုလ်တွေမှာ အများဆုံးအသုံးပြုတဲ့ အသုံးအနှုံးကတော့ Mindfulness Meditation ပါ။ တချို့ သင်တန်းတွေမှာဆိုရင် ၀ိပဿနာကို Religion နဲ့ မဆိုင်ဘူးလို့တောင် အတိအလင်းရေးထားပါတယ်။
မကျေနပ်ပေမယ့်လဲ . . .
ကြော်ငြာကို အောက်မှာ ကူးပြထားပါတယ်။ ဖတ်ကြည့်ရင် အရမ်းကို စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းပါတယ်။ ပထမပိုင်းမှာတော့ ၀ိပဿနာဟာ ယုံကြည်မှု သက်သက်မဟုတ်ပဲ စမ်းသပ်သုတေသနတွေ အမျိုးမျိုးနဲ့ အထောက်အထားခိုင်ခိုင်မာမာ ရှိကြောင်း ရှင်းပြထားပါတယ်။ ဇယားကွက်လေးလဲ ပူးတွဲယှဉ်ပြထားပါတယ်။
သူတို့ဖိတ်ခေါ်ထားတဲ့ ဝေဒါနာရှင် အမျိုးအစားတွေဖတ်ကြည့်ပါ
(၁) နာကျင်ကိုက်ခဲ ဝေဒနာခံစားနေရသူများ
(၃) စိတ်ပင်ပန်းနေသူများ (Stress)
(၅) စိုးရိမ်စိတ်ကြီးသူများနှင့် ထိတ်လန့်ချောက်ချားနေကျသူများ (Anxiety and Panic)
(၆) အစားအသောက်မစားချင်ဖြစ်နေသော ဝေဒနာရှင်များ (GI Distress)
(၇) လုပ်ချင်ကိုင်ချင်စိတ်မရှိ ဖြစ်နေသူများ (Fatigue)
(၈) ကောင်းကောင်းအိပ်စက်လို့ မရသောဝေဒနာရှင်များ (Insomnia)
(၉) စိတ်ကျရောဂါ (သို့မဟုတ်) စိတ်ညစ်နေသူများ (Depression)
(၁၀) အခြား နာတာရှည်ရောဂါဝေဒနာရှင်များ ဆိုပြီး ၉၆ပါး ဝေဒနာရှင် အားလုံးနည်းပါး ဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်။
ဒါကိုကြည့်ရင် ကျနော်တို့ ဗုဒ္ဓရဲ့ တရားတော်ဟာ လူသားတွေကို ဘာသာမရွေး လူမျိုးမရွေး အကျိုးပြုတယ်ဆိုတဲ့သဘောပါ။ ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ရတာ အရမ်းဂုဏ်ယူထိုက်တဲ့ အချက်လို့ ယူဆပါတယ်။
သင်တန်းပြီးဆုံးသွားသူတွေရဲ့ မှတ်ချက်လေးတွေကလဲ အရမ်းကြည်နူးဖို့ကောင်းပါတယ်။
“၀ိပဿနာသင်တန်းကြောင့် ကျနော်ဟာ အခုလူဘ၀ကြီးကို အမြင်သစ် အတွေးသစ် ခံစားချက်အသစ်တွေနဲ့ နေထိုင်နိုင်နေပါပြီ”
“ကျနော်ကတော့ လောကဒဏ်တရားကို ခံနိုင်တဲ့ စွမ်းရည်တွေနဲ့ ဥာဏ်အစွမ်းအစ တွေရရှိလာပါတယ်”
“ခံစားနေရတဲ့ ဝေဒနာတွေကို အဆိုးမြင်စိတ်တွေ နည်းပါးသွားပြီး သည်းခံနိုင်စွမ်း လည်းရှိလာပြီမို့ အခုဆိုရင် အချိန်ပြည့် အလုပ်လုပ်နိုင်နေပါပြီ”
“ ဒီသင်တန်းကနေ ဘ၀တာ တစ်ခုလုံး ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့စေမည့် နေထိုင်သည့် နည်းလမ်းကောင်းကို ရရှိသွားပါတယ်”
အထက်က အကြောင်းအရာတွေကို ကြည့်ရင် လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၂၅၀၀ က မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ တရားဆေးဟာ အံ့မခန်း အစွမ်းထက်တယ်ဆိုတာ ငြင်းလို့ မရတဲ့အချက်ပါ။ ဒါပေမယ့်လည်း ကြော်ငြာထဲမှာတော့ ပါမောက္ခ Jon Kabat-Zinn ကိုပဲ Credit ပေးထားပါတယ်။ ဗုဒ္ဓအမည်တော့ မတွေ့ရပါ။ ဗုဒ္ဓအမည်မသုံးတာ မရိုးသားဘူးလို့ ကျနော် မမြင်ပါ။ ဘာသာရေးလို့ ထင်မြင် မယူဆစေချင်တဲ့ သဘောထားလို့ ထင်ပါတယ်။ မူရင်းတွေ့ရှိသူရဲ့ အမည်ကို မသုံးတဲ့အတွက် မှန်ကန်တဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်လို့ မမြင်ပါ။ ဒါပေမယ့် တရားတော်ရဲ့ အကျိုးကို လူသားတွေ ပိုမို ခံစားနိုင်အောင် လုပ်ပေးတဲ့ သင်တန်း တစ်ခုမို့ ကျေနပ်မိပါတယ်။
Posted by * In Search of Truth * at 9:19 PM4comments Links to this post
ဒီမိုကရေစီသမားတွေ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး တိုးတက်မှု ကျနော်တို့ စောင့်ကြည့်နေပါတယ်။ တချို့တလေကတော့ လက်တွေ့ကျကျ တွေးခေါ်သင့်တယ်ဆိုတာ လက်ခံလာတဲ့ အရိပ်အယောင် ပြလာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အများစုကတော့ အမှောင်ထဲမှာ လမ်းပျောက်နေတုံး ဆိုတာ မြင်နိုင်ပါတယ်။ အဲဒီလူတွေဟာ အချိန်ပြည့် နအဖကို အပြစ်တင်တယ်၊ သတင်းတွေကို ချဲ့ကားပြောတယ်၊ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး တိုက်ခိုက်တယ်။ ရှေးအစဉ်လာအပျက် ဆက်လက် လုပ်နေကျပါတယ်။ နအဖကို လုံးဝ မဝေဖန်နဲ့လို့ ဆိုလိုတာ မဟုတ်ပါ။ အရေးကြီးတဲ့ ဆန္ဒပြပွဲမှာ ဘာတွေ လွဲမှားနေလဲဆိုတာကို ဝေဖန် စမ်းစစ်တာမျိုး မလုပ်ကျသေးပါဘူး။ လုပ်လဲ လုပ်ရဲဟန်မတူပါ။ နအဖလူလို့ စွပ်စွဲ ဆဲဆိုပြီး ဘလော့ကို သပိတ်မှောက်မယ့်အရေးကို ကြောက်ရသေးတယ် မဟုတ်လားဗျာ။ ကျနော်တို့ နှစ်ယောက်ကတော့ ဘယ်သူ့ကိုမှ ဂရုမစိုက်ပါ။ ဒါကြောင့် ဒီမိုကရေစီမသမားတွေရဲ့ စိတ်ဓါတ်ကို ခေါင်းစဉ်လေးတွေ ခွဲပြီး အပိုင်းလေးတွေနဲ့ တင်ပြသွားပါမယ်။
မဆလ ပြုတ်ကျခဲ့ရတဲ့ အဓိက အကြောင်းအရင်း ကတော့ သူတို့ လုပ်ရပ်ကို ဝေဖန်စမ်းစစ်ခြင်း မလုပ်ခဲ့လို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လဲ တိုင်းပြည်ဟာ အဆင်းရဲဆုံး နိုင်ငံအဖြစ်ရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ မိဘတွေ ပြောပြချက်အရ ဦးရှုမောင်ကြီး တစက်မှ အသုံးမကျတာတောင် လူတွေက နားလည်ခွင့်လွှတ်ခဲ့ကျတယ် ဆိုပဲ။ သူရာထူးကနေ ဆင်းမယ်လုပ်တော့ မျက်ရည်ကျခဲ့တဲ့သူက မနည်းလှဘူးတဲ့။ အဲလောက် သည်းခံစိတ်ရှိတဲ့ ပြည်သူတွေဟာ ဦးနေ၀င်းကို မြောင်းထဲပို့ခဲ့တာ လူတိုင်းသိပါတယ်။ ခွေးတိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ ခိုင်းနှိုင်းတာတွေကိုလဲ ခံခဲ့ရပါတယ်။
နောက်ဘယ်သူတွေ မြောင်းထဲ အပို့ခံရ မလဲ? ဒီမိုကရေစီသမားတွေက နအဖ လို့ပြောကျမှာပါ။ ကျနော်ကတော့ ဒီမိုကရေစီသမားတွေလဲ ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ပြောချင်ပါတယ်။ အခုလိုပြောလို့ စိတ်ဆိုးလည်း မတတ်နိုင်ဘူးဗျ။ ပြောသင့်တာတော့ ပြောရမှာပဲ။ နအဖကို တော်လှန်လာတာ ၁၉ နှစ်ရှိပြီ။ ပြည်သူတွေ ပင်ပန်းလာကျပြီ။ ဒီတော့ နအဖ ပြုတ်ကျအောင်လုပ်ဖို့ ရှေးရိုးအစဉ်အလာအတိုင်း ဆက်လုပ်သွားရင်တော့ ပြည်သူတွေရဲ့ သဘောထား ဆန့်ကျင်ဘက်ကို ရောက်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာ သတိထားပါ။ ထို့အတူပဲ နအဖအနေနဲ့ နည်းဟောင်းတွေကို ဘယ်လိုကိုင်တွယ်ရမလဲ သိနေပါပြီ။ ဒါကြောင့် နည်းသစ်တွေ လိုနေပါပြီ။ နည်းသစ်တွေ စဉ်းစားဖို့က လက်ရှိ နည်းလမ်းတွေထဲက ကောင်းတွေကို ချန်ထားပြီး မကောင်းတာတွေကို ထုတ်ပြစ်ဖို့လိုပါတယ်။ ဒီတော့ ဘယ်အပြုအမူတွေကို ပြင်သင့်လဲသိဖို့ စမ်းစစ်ကြည့်ကျပါစို့။
ဒီမိုကရေစီသမားတွေဟာ ဘယ်အလုပ်က အရေးကြီးလဲဆိုတာ သိရှိပုံ မပေါ်ဘူးဗျ။ အလုပ်ကို မလုပ်တတ်သူတွေလို့ မြင်ပါတယ်။ ဆန္ဒပြပွဲမှာ သံဃာတွေ ပါလာတော့ သူတို့နိုင်မယ်ထင်ပြီး ဦးသန်းရွှေကို တရားစွဲဖို့ စဉ်းစားတဲ့သူက စဉ်းစား။ ဒေါ်ကြိုင်ကြိုင် ဈေးဝယ်ထွက်တာကိုလည်း အားလုံးတပြေးညီ စိတ်ပါဝင်စား စုံစမ်းကျတယ်ဗျာ။ နအဖ ဘာမှ မလုပ်သေးတာကိုပဲ သူတို့က အောင်ပွဲခံနေကျတယ်ဗျ။ တကယ်ဆိုရင် ဆန္ဒပြပွဲမှာ အရှိန်မကျအောင် ဘယ်လိုလုပ်သင့်လဲ စဉ်းစားသင့်ပါတယ်။ နအဖ ဘာတွေ ကြံစည်နေလဲ စဉ်းစားသင့်ပါတယ်။ ဘုန်းကြီးတွေ အပစ်မခံရအောင် ဘယ်လို အကြံပေးရမလဲ စဉ်းစားသင့်ပါတယ်။ အစ်ကိုမောင်ဆန်နဲ့ ကျနော် တိုင်ပင်ပြီး လူထု အင်အားကျမသွားအောင် ထိပ်တိုက် မရင်ဆိုင်ဖို့ ၊ ရဲတွေနဲ့တွေ့ရင် လူစုခွဲဖို့နဲ့ အိမ်တွေထဲကနေ သံပုံးတီးပြီး ဆန္ဒပြဖို့ ဆီပုံးတွေ အများကြီးထဲမှာ ရေးခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါ စစ်အုပ်ချုပ်ရေးစထုတ် တဲ့နေက ဖြစ်ပါတယ်။ သိတဲ့အတိုင်း နအဖလူလို့ သတ်မှတ်ပြီး ကျနော်တို့ ရေးထားတာကို စဉ်းစားဖို့ တချက်လေးမှ ဂရုမစိုက်ကျပါဘူး။ ဒါဟာ အကြောင်းအရာပေါ်မှာ တည်တည်တံ့တံ့ တွေးခေါ် မပြောရဲကျဘူး ဆိုတဲ့ သဘောပါ။ သူတို့ ဦစားပေးတာက လုပ်သင့်တာ လုပ်ဖို့ထက်၊ စိတ်ထဲပေါ်ရာကိုပဲ လုပ်ချင်ကျတာ မဟုတ်လား?
ဒုတိယ တင်ပြချင်တာကတော့ ဒီမိုကရေစီသမားတွေဟာ နအဖ သတင်းစာတွေပေါ်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတိုက်ခိုက်တဲ့ ကိစ္စအပြင်းအထန်ကန့်ကွက်ခဲ့ကျပါတယ်။ နအဖလုပ်ရပ်ဟာ မမှန်ကန်ဘူးဆိုတဲ့ သဘောပါ။ ဒါပေမယ့် အဲလိုအပြစ်တင်ခဲ့တဲ့ ဒီမိုကရေစီသမားတွေ အခုဘာလုပ်နေလဲ? နအဖ ခေါင်းဆောင်တွေကို ဆဲပါတယ်။ သန်းရွှေ၊ မောင်အေး ခေါ်ပြီး ခွေးတွေနဲ့ နှိုင်းပါတယ်။ ဘာအတွက် အခုလိုလုပ်နေတာလဲ? ဘာအကျိုးထူးမှာမို့လဲ ? (နိုင်ငံခြား ဘဏ်တွေမှာ ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေ အကောင့်ဖွင့်ခွင့် ပိတ်ပင်တာကို ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတိုက်ခိုက်မှုလို့ မမြင်ပါ ။ အားပေးပါတယ်) နောက်တစ်ချက် သတိထားဖို့က ကျနော်အပါဝင် ပြည်သူတွေ အားလုံးဟာ မြန်မာလူမျိုးတွေပါ။ အသက်ကြီးသူကို ခွေးနဲ့နှိုင်းတယ်ဆိုတာ မြန်မာအစဉ်အလာနဲ့ ဆန့်ကျင်နေပါတယ်။ နအဖ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဂုဏ်ပိုတက်သွားတာ သတိထားမိကျမှာပါ။ ဒီတော့ ကျနော် အပါဝင် တခြား မြန်မာ့လူမျိုးတွေဟာ ဒီမိုကရေစီသမားတွေကို အပေတေတွေလို့ မြင်လာရင် အန္တရယ်ကြီးလာနိုင်တယ်ဆိုတာ သတိထားကြပါခင်ဗျာ။ ဒါတင်ပဲလားဆိုတော့ မဟုတ်ပါဘူး.. ရန်ရှာတဲ့ကိစ္စလည်း မေ့ထားလို့မရပါဘူး
ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားသူတွေ ဆန့်ကျင်နေတာ နအဖခေါင်းဆောင် ဦးသန်းရွှေက အစ အောက်ဆုံး စစ်သားအထိပါ။ ဒီထဲမှာ ၀န်ထမ်းတွေ၊ ကြံ့ဖွတ်တွေ၊ စွမ်းအားရှင်တွေလည်း ပါနေပါတယ်။ စစ်သား အင်အား ၄ သိန်း ကို သူ့တို့ မိသားစုနဲ့ မိဘတွေပါထည့်တွက်ရင် စစ်တပ်အဆက်အသွယ် တစ်သန်းခွဲအင်အားရှိပါတယ်။ ကြံဖွတ်နဲ့ စွမ်းအားရှင်တွေ ၊ ရ၀တ အဆက်အသွယ်ပါ ထည့်တွက်ရင် စုစုပေါင်း ၄ သန်းကျော် ၅ သန်းအထိ ရှိမှာပါ။ ဒီလူတွေဟာ နည်းတဲ့ ဦးရေ မဟုတ်ပါဘူး။ တနည်းပြောရရင် မြန်မာလူမျိုး ၅ သန်းကို ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့တွေက ဆန့်ကျင်နေတာပါ။ ဒီမိုကရေစီသမားတွေဟာ ပါးစပ်ကတော့ စစ်တပ်ကို ဆန့်ကျင်တာ မဟုတ်ပါဘူးလို့ ပြောကျပါတယ်။ လက်တွေ့မှာတော့ အဲလိုမမြင်ရပါဘူး။ သူတို့ဟာ နအဖ၀န်ထမ်းတွေကိုလဲ ရန်သူတဖွယ် မှတ်ယူတယ်လို့ ကျနော် ရိုးသားစွာ မြင်ပါတယ်။ ဥပမာ သံရုံးဝန်ထမ်းတွေဟာ သူတို့ ဘ၀ရပ်တည်ရေးအတွက် နအဖထံမှာ အလုပ်လုပ်နေကျတာပါ။ ဒါပေမယ့် ဒီမိုကရေစီ သမားတွေက နအဖလူလို့ပဲ ပလိမ်းကြီး သတ်မှတ်ပါတယ်။ အစ်ကို / အစ်မတို့ သာ အစိုးရ ၀န်ထမ်းဖြစ်နေရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ? အလုပ်ထွက် ထမင်းအငတ်ခံပြီး ဒီမိုကရေစီဘက်ကို ပြောင်းလာမလား? ဒါမှမဟုတ် စိတ်ထဲကနေ ချဉ်သွားပြီး ဒီမိုကရေစီတော်လှန်ရေးကို ဆန့်ကျင်တဲ့ အမြင်တွေ ၀င်မလာနိုင်ဘူးလား? (သူတို့နေရာကနေ နေပြီး စဉ်းစားကြည့်ပါ) သေချာတာကတော့ ဘယ်သူမှ မိမိဝမ်းရေးထက် ဘာကိုမှ ဂရုစိုက်မှာ မဟုတ်ပါ။ အခုနောက်ဆုံး မိန်းမ အတွင်းခံ ဘောင်းဘီတွေ လက်ခံရရှိတဲ့ ၀န်ထမ်းမိသားစုက ဘယ်လိုခံစားရမလဲ? သတိထားဖို့ တင်ပြတဲ့သဘောပါ။
ကျနော့် အမြင် စစ်ခေါင်းဆောင်တွေကို ရန်သူသဖွယ် မဆက်ဆံစေချင်ဘူး။ တကယ်တမ်း နအဖ အပြစ်ဟာ စီးပွားရေး နဲ့ အုပ်ချုပ်ရေး ညံ့ဖျင်းချင်းက အဓိကပါ။ သူတို့ဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာ မြန်မာတွေ ဖြစ်တဲ့အတွက် သတင်းတွေထဲမှာ ပြောသလောက် မရက်စက်ကျပါဘူး။ (ပြောသလောက် မရက်ဆက်ဘူး ဆိုတာနဲ့ မင်းကျင့်တရား ဆယ်ပါးနဲ့ အညီ အုပ်ချုပ်တယ်ဆိုပြီး တလွဲမယူဆပါနဲ့) အမေရိကန် အစိုးရနဲ့ ယှဉ်ကြည့်ရင် နအဖ အများကြီး တော်ပါသေးတယ်။ ဒါဟာ အမှန်တရားပါ။ မခံချင်လို့ မဖြစ်ပါဘူး။
အယ်ဂျာဇီရာ သတင်းထဲမှာ ပြောသွားတဲ့ စကားလေးကို မှတ်မိနေပါတယ်။ “ ဗိုလ်ချုပ်တွေက ပြည်သူတွေကို ကြောက်နေတယ်။ ပြည်သူတွေကလည်း ဗိုလ်ချုပ်တွေကို ကြောက်နေတယ်တဲ့။ ” အဲဒီစကား မှန်တယ် ထင်ပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်တွေ ပြည်သူတွေကို ဘာကြောင့် ကြောက်နေတယ်ထင်လဲ? ဗိုလ်ချုပ်တွေကို တရားစွဲမယ်၊ စစ်ခုံရုံးတင်မယ်၊ အိမ်ခြံတွေကို သိမ်းမယ် ဆိုတာမျိုး ချိမ်းခြောက် တာတွေ ရှိနေပါတယ်။ ဦးသန်းရွှေ အခုအသက် အရွယ်အထိ အဏာ ယူထားတာဟာ သူမိသားစု ကြောင့်လဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ရန်ငြိုးတွေ သင်ပုံးချေပေးမယ်လို့ ပြောရင် အနည်းနဲ့ အများဆိုသလို အဏာလွှဲဖို့ စိတ်ဝင်စားမှာပါ။ ဒါကြောင့် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီတော်လှန်ရေးကို အရှေ့အလယ်ပိုင်း နဲ့ ဥရောပလို လုပ်ယူလို့ရမှာ မဟုတ်ပါ။ လူမျိုးဓလေ့ လူမျိုးယဉ်ကျေးမှုကို စဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်။
ဆောင်းပါး (၁) ကိုအဆုံးမသတ်မီ
ကျနော်အထက်က တင်ပြတာတွေဟာ ဒီမိုကရေစီတော်လှန်ရေးကို လက်မြှောက် အရှုံးပေးဖို့ ပြောနေတာ မဟုတ်ပါ။ အဲလိုလုပ်စရာလဲ မလိုပါ။ အစ်ကိုတို့ အနေနဲ့ ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကို ဘယ်လို လုပ်မလဲဆိုတာ အားမနာတမ်း မေးခွန်းထုတ်သင့်တယ် ထင်ပါတယ်။ ဒီလိုမေးခွန်းထုတ်ချင်းအားဖြင့် သူတို့တွေကို ပိုမိုလက်တွေ့ကျတဲ့ အစီအစဉ်တွေ စဉ်းစားလာအောင် တွန်းအား ပေးသလို ဖြစ်လာမှာပါ။ အဲလိုမှ မလုပ်ရင် ပြည်သူတွေကို ဒုက္ခရောက်စေတဲ့ စီးပွားရေး သပိတ်နဲ့ မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ ကိုယ်ရည် ကိုယ်သွေး ကျဆင်းစေတဲ့ နအဖကို အတင်းပြောတဲ့ အဆင့်နဲ့ပဲ သံသရာလည်နေမှာပါ။
အခုဆောင်းပါးရေးတာ ဘေးထိုင်ဘုပြော လုပ်နေတာ မဟုတ်ရပါ။ ကျနော်တို့ နှစ်ယောက် မှာ တွေးခေါ်ထားတဲ့ အစီအစဉ်လေးတွေ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နောက်နှစ်လ သုံးလ လောက်ကြာမှ တင်ပြချင်ပါတယ်။ ထုံးဆန်အတိုင်း ဗုဒ္ဓရဲ့ မေတ္တာတရားပေါ်မှာပဲ အခြေခံပါတယ်။ လတ်တလောကတော့ အတွေးအခေါ် အယူအဆပိုင်းပဲ ပြောင်းလဲဖို့ ဆောင်းပါးလေးတွေပဲ ဦးစားပေးပါမယ်။
Posted by * In Search of Truth * at 8:25 PM 15 comments Links to this post
Labels: မြန်မာနိုင်ငံ, ဝေဖန်ချက်
အနောက်နိုင်ငံတွေမှာတော့ ဗုဒ္ဓတရားတော်ကို ပါမောက္ခကြီးတွေ ကိုယ်တိုင် သူတို့ တက္ကသိုလ်တွေမှာ တခမ်းတနား ဆွေးနွေးနေကျတဲ့ အချိန်ပေါ့ဗျာ။ မြန်မာလူမျိုးတွေကတော့ ဗုဒ္ဓတရားတော်ကို ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာပဲ လိုက်နာ ကျင့်သုံးအပ်တဲ့ အရာလို့ပဲ ယူဆနေကျဆဲပါ။ ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ရဲ့ မေတ္တာတရားတော်ကို နအဖ ဆင်းပေးရေးမှာ အသုံးပြုဖို့ အဆိုပြုချိန်မှာတော့ သူတို့က ဟာသလုပ်ကျပါတယ်။ ဘာသာတရားကို အရေးကြီးတဲ့ နိုင်ငံရေးလို နေရာမျိုးမှာ အားမကိုးချင်ဘူးဆိုတဲ့ သဘောပါ။ တနည်းပြောရရင် မယုံကြည်ဘူးပေါ့ဗျာ။ ဖြစ်နိုင်ရင် အကြမ်းဖက် ချင်တယ်ပေါ့။ အာရပ်နိုင်ငံတွေမှာ အကြမ်းဖက် ၀ါဒကို အခြေခံပြီး နိုင်ငံရေး လှုပ်ရှားနေတာ ဘာထူးလဲ? ပြည်သူ့ အကူအညီနဲ့ လက်နက်အားကိုးပြီး တက်လာတဲ့ အဖွဲ့တွေဟာ အင်အားကောင်းလာတဲ့ အချိန်မှာ လူထုကို နှိပ်စက်ညှင်းပန်း တာလူတိုင်း အသိပဲ။ အဲဒါတွေကို သတိ မထားမိကျဘူး ထင်တယ်ဗျ။
ကဲ . .. ဒီအပတ်မှာ တင်ပြမှာကတော့ ကျောင်းသူ/ ကျောင်းသား တွေ ၀ိပ္မဿနာရှု့မှတ်ဖို့ တိုက်တွန်းထားတဲ့ ဆောင်းပါးလေးကို တင်ပြ ချင်ပါတယ်။ တရားထိုင်တဲ့သူဟာ အတွေးအခေါ်ပိုင်းမှာ စူးရှထက်မြက်လာ စေတယ်လို့ အမေရိကန် Physics ပါမောက္ခ Fritjof Capra က ပြောခဲ့ပါတယ်။ တရားထိုင်တဲ့ ကျောင်းသားတွေဟာ ၁၀နာရီလောက် အချိန်ပေးရတဲ့ ပုစ္ဆာကို ၆နာရီနဲ့ ပြီးအောင် ဖြေရှင်းနိုင်တာ သူရဲ့ ကိုယ်တွေ့ ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ထက်ဝက်လောက် အထိ ကွာသွားပါတယ်။
နောက်ပြီး ဒီဘက်နိုင်ငံက ကျောင်းသားတွေဟာ Project တွေ၊ စာမေးပွဲ တွေ တခုပြီး တခု လုပ်ကျရပါတယ်။ Project အတွက် လူရှာရတာကလဲ ဒုက္ခ တမျိုးပါ။ သူတို့ ဦးနောက်တွေဟာ ပြည့်ကျပ်နေပြီး စိတ်ပင်ပန်း တာတွေ၊ စိုးရိမ်စိတ်တွေ အမြဲ ကြုံနေရပါတယ်။ ဒီတော့ စိတ်နဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာ ကျန်းမာရေး ကိုထိခိုက် လာနိုင်ပါတယ်။
Terry Pearson က နေ့ခင်းမှာ တရေးတမော အိပ်တာထက် ၅ မိနစ်လောက် ၀ိပဿနာ ရှု့လိုက်တာက ပိုပြီး အကျိုးထူးတယ်လို့ တောင် အကြံပြုထားပါတယ်။ သူမဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာ သီလရှင် မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီဘက်မှာ ၀ိပဿနာပြဖို့ တက္ကသိုလ် ကနေ လေ့ကျင့်ပေးတဲ့ သူပါ။ သူမကို mindfulness-based stress reduction instructor (“သတိပဌာန် အခြေခံ စိတ်ပင်ပန်းမှု ပပြောက်ရေး နည်းပြဆရာ” လို့ ဘာသာပြန်ရ မလားမသိဘူး) လို့ခေါ်ပါတယ်။ သူမ အကြံပြုချက်တွေကို အကျဉ်းချုပ်တင်ပြရမယ်ဆိုရင်
(၁) တနေ့ နှစ်ကြိမ် တကြိမ်ကို ငါးမိနစ်လောက် ၀ိပဿနာရှု့ပါ။ ၀ိပဿနာ ရှုချင်းဖြင့် စိတ်ငြိမ်းချမ်းမှု ရစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် စာတွေကို ပိုမို ထိရောက်စွာ လုပ်နိုင်မှာဖြစ် ပါတယ်။ (ဗုဒ္ဓတရား အကျိုးများလေစွ)
(၂) စာမေးပွဲဖြေနေတဲ့ ရက်တွေမှာ စိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေ ပိုများနိုင်ပါတယ်။ အသီးအနှံနဲ့ အရွက်များကို စားသောက်ပါ။ (သက်သက်လွတ်ကို ဆိုလိုချင်း မဟုတ်ပါ) ချောကလက်၊ ချိုချဉ်တို့ကို မစားပါနဲ့။ ကော်ဖီ , pepsi, cola များ သောက်ချင်း (လက်ဖက်သုတ်လည်း ပါမယ်ထင်တယ်) ကို လျှော့ပါ။ အဲဒါတွေ ဟာ မျက်လုံးကျယ်ပြီး မအိပ်ပဲ စာဖတ် နိုင်သော်လည်း မှတ်ဥာဏ်အတွက် ဘာမှ အကျိုးမပြုပါ။ ထို့အတူ stress level လဲ မြင့်လာတတ်ပါသည်။
(၃) အိပ်ရေး အပျက်မခံပါနဲ့
(၄) စာဖတ်တာ ကြာလာရင် နေရာပြောင်းဖတ်ပါ။ အပြင်ထွက်ဖတ်နိုင်ရင် ဖတ်ပါ။ မဖတ်နိုင်ရင် အိမ်ခန်းပြောင်း ဖတ်ပါတဲ့ဗျ။ အပြောင်းအလဲကြောင့် စိတ်က ပိုမို တက်ကြွလာမယ်ဆိုပဲ။
(၅) စာကျက်လို့ ပင်ပန်းလာရင် အတင်း ဆက်မလုပ်ပါနဲ့။ နာရီဝက်လောက် နားချင်နားပါ။ အိပ်ချင် အိပ်ပါတဲ့။
ကဲဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာ။ ဖြစ်နိုင်ရင် နေ့စဉ်မှန်မှန် ၀ိပဿနာလုပ်ကြည့်ပါ။ အထူးသဖြင့် ခေါင်းထဲမှာ ပြည့်ကျပ်နေရင် အရမ်းကို အဆင်ပြေပါတယ်။ စမ်းသပ်ကြည့်ပါခင်ဗျာ။ တကယ်ကို အကျိုးထူးပါတယ်။
ကိုးကားချက် ။ ။
Relaxation and meditation helps students' stress during exams
Posted by * In Search of Truth * at 5:59 PM 11 comments Links to this post
ဘာကြောင့်လဲ ? ဘာရည်ရွယ်ချက်လဲ?
ဒီနေ့ နေလည်မှာ မော်စကိုသား အိုင်ဒီနဲ့ ရေးထားတဲ့စာတွေကို ဖတ်ပြီး စိတ်ထဲမှာ ထောင်းကနဲ ဒေါသ ဖြစ်သွားပါတယ်။ သူပြောပုံကို ကြည့်ပါ
ငါလိုးမသားတွေ 10 Oct 07 11:58 212.149.201.132
လာပြန်ပြီလား ဒီဘုန်းကြီးသတ်တဲ့ကိစ္စ 10 Oct 07 11:59 212.149.201.132
သတ်တော့ လီးဖြစ်လားကြွ 10 Oct 07 11:59 212.149.201.132
စစ်သားကွ 10 Oct 07 12:01 212.149.201.132
မိုးပေါ်ထောင်မပစ်တတ်ဘူး တည့်တည့်ပစ်တယ် 10 Oct 07 12:02 212.149.201.132
မအေလိုးတွေ အကုန်ပစ်သတ်မယ် 10 Oct 07 12:02 212.149.201.132
ငါလိုးမ ကတုံးတွေ 10 Oct 07 12:02 212.149.201.132
ဒီနေရာမှာ ဘာသာရေး စော်ကားထားတာလည်းပါနေပါတယ်။ လူအသိစိတ် ခေါင်းပါးနေတာလဲ ပါနေပါတယ်။ "စစ်သားဆိုတဲ့ကောင် တွေက ဘယ်လို သတ္တ၀ါတွေလဲ?" လို့ စိတ်ထဲမှာ ပြောမိလိုက်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် “ငါလိုးမ ကတုံးတွေ” ဆိုတဲ့ စကားဟာ အရမ်းကို အောက်တန်းကျလွန်းပါတယ်။
ခဏကြာတော့ ဘာရယ်လို့ မဟုတ်ဘူး။ သူ့ IP ကို ကြည့်ချင်စိတ် ဖြစ်လာတာနဲ့ လှမ်း စစ်ကြည့်လိုက် ပါတယ်။ သြော်အဲ IP နံပါတ်ဟာ မော်စကို မပြောနဲ့ ရုရှကတောင် မဟုတ်ဘူးဗျ။ သူဟာ Finland နိုင်ငံ Kuopio မြို့က ဖြစ်နေပါတယ်။
အဲဒီ “မော်စကိုသား” အိုင်ဒီပိုင်ရှင်ကိုမေးချင်ပါတယ်
(၁) ရုရှက မဟုတ်ပဲ ဘာကြောင့် မော်စကိုသားနာမည်ယူထားလဲ? တခြား Finland သားလို့ အိုင်ဒီယူလဲဖြစ်တာပဲ။
(၂) ဘာကြောင့် “ငါလိုးမ ကတုံးတွေ” လို့ဆဲလဲ? ဒါဟာ ဘာသာရေး စော်ကားမှုဆိုတာ မသိလောက်တဲ့အထိ ဥာဏ်ရည်နိမ့်လို့လားခင်ဗျာ?
(၃) အစ်ကို ကိုယ်တိုင်က အမှန်တကယ် စစ်သားလား? စစ်သားက Finland မှာ ဘာသွားလုပ် နေလဲ?
(၄) အခုလို မော်စကိုသားဆိုတဲ့ အိုင်ဒီနဲ့ ဘုန်းကြီးတွေကို ပစ်တာ အားပေးချင်းသည် လူတွေ နဲ့ စစ်တပ်အကြား ပိုပြီး အညှိးကြီးစေပါတယ်။ ဘာကြောင့် ရန်တိုက်ပေးလဲ? ဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့ အခုလို ပြောသလဲ?
အဲဒီမေးခွန်းတွေကို ကိုမော်စကိုသား IP အမှတ် (212.149.201.132) အနေနဲ့ ဖြေကြားပေးပါလို့ တောင်းဆိုပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီသမားများတွေကို ပြောချင်ပါသည်။ ကိုမော်စကိုသားသည် စစ်သားလဲဖြစ်နိုင်ပါသည်။ နောင်တွင် ယခုလို မပြောစေလိုပါက (၀ါ) စစ်သား တစ်ယောက်ကို အပြစ်ပေးလိုပါက ဘာသာရေးစော်ကားမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တရားစွဲဆိုနိုင်ပါသည်။ IPမှ တဆင့် မော်စကိုသားသည် မည်သူ မည်ဝါ ဖြစ်ကြောင်း ရှာဖွေနိုင်ပါသည်။ တရားစွဲဆိုချင်းနဲ့ နအဖ လူ (၀ါ) ဒီမိုကရေစီ လုပ်စားသူကို ပြစ်ဒဏ်ပေးနိုင်ကြောင်း အသိပေးပါသည်။ ကျနော့ ဆီဗုံးလေးကို ခဏ ပိတ်ထားပါတယ်။ ကိုမော်စကိုသားရဲ့စာတွေကို မူရင်းအတိုင်း မြင်လိုသူများအတွက် ဖြစ်ပါတယ်။
မော်စကိုသား Proxy သုံးပြီး ရေးထားတာ ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ပြောကျ ပါတယ်။ ကွန်ပျူတာ နည်းပညာ ရှပ်ထွေးတာ ကျနော် လက်ခံပါတယ်။ ကျနော့ ကိုယ်ပိုင် စမ်းသပ် တွေ့ရှိချက်အရ Proxy သုံးမထားလို့ ယူဆပါတယ်ခင်ဗျာ။
ကျနော့ စမ်းသပ် နည်းလေးကို ပြောပြရမယ်ဆိုရင်. . . IP address ကို Ping လုပ်ကြည့်ပါ။ တကယ်လို့ Proxy server ရဲ့ IP ဆိုရင် 0% looss ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် 100% loss ဖြစ်ရင် အဲဒါ Proxy မဖြစ်နိုင်ပါ။ ( 0% loss ဖြစ်နိုင်သည့် အခြား အကြောင်း တွေကတော့ အင်တာနက်ကို Router မပါပဲ အသုံးပြုချင်း၊ Firewall မရှိချင်း၊ မိမိ ကိုယ်ပိုင် IP ကို Ping ချင်း တို့ဖြစ်ပါသည်) အပေါ်မှာ တင်ပြခဲ့ သလိုပဲ Proxy စမ်းသပ်မှုတွေဟာ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် မှားယွင်းနိုင်တာ သဘော တူပါတယ်။ နောက်တချက် ကတော့ Finland နိုင်ငံမှာ Proxy Server ထောင်တာ မရှိ သလောက် ရှားပါတယ်။ ကျနော့ စမ်းသပ်ချက်ဟာ 90% မှ 95% အထိ တိကျပါတယ်။ 5% ပဲ အမှားရှိနိုင်ပါသည်။ ဒါကြောင့် ရုရှမှ စစ်သား ဆိုသည်ထက် Finland မှ စစ်တပ်နဲ့ ပြည်သူတွေ အကြား ရန်တိုက်ပေးသူ ဖြစ်နိုသည်မှာ 95% အထိ သေချာပါသည်။
တကယ်လို့ ကျနော့ စမ်းသပ်ပုံ ချို့ယွင်းတယ်လို့ တွေ့ရှိပါက ပြောပြပေးပါ။ အမှန်ကိုိ ပြောပြသူတိုင်းကို ကျေးဇူးတင်ပါမယ်။ ဒါပေမယ့် မိမိနဲ့ဝါဒတူ လူတစ်ယောက်၏ ယုတ်မာသည့် အကြံကို ဖုံးဖိလိုသည့် သဘောဖြင့် လိမ်ညာ ဆင်ချေပေးဖို့ မကြိုးစားပါနဲ့ လို့ မေတ္တာရပ်ခံချင်ပါတယ်။ နိုင်ငံအရေးမို့ ရိုးသားပေးစေချင်ပါတယ်။
Posted by * In Search of Truth * at 7:23 PM9comments Links to this post
သီအိုရီ အရတော့ သတင်းဆိုတာ အမှန်ပဲ ဖေါ်ပြရမှာပါ။ မတော်တဆ သတင်းကို မှားယွင်း ဖေါ်ပြမိတယ်ဆိုရင် တော့ တမျိုးပေါ့ဗျာ။ ခက်တာ သတင်းမှားကို တမင် လုပ်ပြီး တင်ပြတာကတော့ မသင့်တော်ဘူးထင်တယ်ဗျ။ လူကျင့်ဝတ် ရှုထောင့်ကပဲ ဖြစ်ဖြစ် နိုင်ငံရေးဘက်ကပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဘာသာရေးဘက်ကပဲဖြစ်ဖြစ် လုံးဝ မလုပ်သင့်ဘူးဗျ။
လူတွေကတော့ ဆန္ဒပြပွဲ ငြိမ်သွားလို့ ပြီးခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေကို မှတ်တမ်းတင်ပြီး သပိတ်တွေ လုပ်ဖို့ ပြင်ဆင်နေကျပါပြီ။ ပြီးခဲ့တဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေ အပေါ်မှာ သင်ခန်းစာယူဖို့ ဝေဖန် ဆန်းစစ်တာတွေ လုပ်တာတော့ မတွေ့မိဘူးဗျ။ နအဖကို အပြစ်တင်တာပဲ လုပ်ကျပါတယ် . . . .ဒါပါပဲ။ နအဖ ဘယ်လို နည်းဗျူဟာ အသုံးပြု နှိမ်နင်းလဲ ဆိုတာလဲ မစမ်းစစ်ကျပါဘူး။ တကယ်တော့ နအဖသုံးတဲ့ နည်းဗျူဟာကို လေ့လာမယ်ဆိုရင် နောင် ဆန္ဒပြပွဲတွေမှာ ပိုမိုထိရောက်တဲ့ နအဖပြုတ်ကျရေး လမ်းစဉ်ကို စဉ်းစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
အခုပြောချင်တာ မြန်မာမွတ်ဆလင် ၀က်ဆိုက် လိမ်ညာ သတင်းထုတ်လွှင့်မှု ဖြစ်ပါတယ်။ အပေါ်ဆုံးညာဘက်က ဓါတ်ပုံကတော့ မြန်မာမွတ်ဆလင် ၀က်ဆိုက်ကနေ ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ သတင်းဓါတ်ပုံပါ။ အစ်ကို ကဒေါင်းညင်သာ ဘလော့မှာ တွေ့လို့ ပြန်ယူထားတာပါ။ အဲဒီဓါတ်ပုံမှာ
“တာမွေ အထက (၃) ရှေ့တွင် စစ်အဏာရှင်များ၏ လက်ပါးစေ စစ်သားများမှ ရက်စက်စွာ ရိုက်နှက်မှုကြောင့် သေဆုံးသွား ကျောင်းသား လူငယ်တစ်ဦး၏ ဦးနောက် ရေမြောင်းအတွင်းသို့ ပြုတ်ကျစဉ်” စာရေးထားပါတယ်။
ပုံ(၁) နဲ့ ပုံ(၂) ကို သေချာ လေ့လာ ကြည့်ပါ။ ဦးနောက်ဟာ ဦးခေါင်းခွံထဲမှာ လုံခြုံစွာ တည်ရှိနေပါတယ်။ အဲဒီ ဦးခေါင်းခွံကို အရေပြားနဲ့ ဖုံးအုပ်ထားပါတယ်။ လက်တွေ့ စဉ်းစားကြည့်ပါ။ ခေါင်းကို ဒုတ်နဲ့ ကြိုက်သလောက်ရိုက်ပါ။ သွေးထွက်မယ်။ အတွင်းဘက်က ဦးခေါင်းခွံ အက်သွားမယ်။ လူသေသွားပါမယ်။ ဒီလောက်ပဲ အများဆုံး ဖြစ်မှာပါ။ ဦးခေါင်းခွံကြီးပေါက် သွားတာမျိုး မဖြစ်ပါဘူး။ ဦးနောက် ထွက်မကျအောင်လဲ အပေါ်အရေပြားက ဖုံးအုပ် ကာကွယ်ထားပါတယ်။
အဲဒီ ဓါတ်ပုံမှာတော့ ဦးနောက်က ရေမြောင်းထဲ ပြုတ်ကျသွားတယ်လို့တောင် လုပ်ထားပါတယ်။ အဲဒါ ဖြစ်နိုင်လား? အဲလို ဖြစ်ဖို့က ခေါင်းခွံ အရိုးကြီး ပွင့်သွားဦးတော့ အပေါ်က အရေးပြားတွေက ကာကွယ်ထားမှာပါ။ ဒုတ်နဲ့ရိုက်လို့ ဦးနောက် ထွက်လာတာ ကြားဖူးပါသလား။ လိမ်ညာ ဓါတ်ပုံဆိုတာ သိသာပါတယ်။ ( တကယ်လို့ ဒုတ်နဲ့ရိုက်လို့ ဦးနောက် ထွက်ကျလာတယ်လို့ ကြားဖူးတဲ့ သူရှိရင် comment တွင်ရေးပြပေးပါ) မှုံဝါးအောင် လုပ်ထားကတဲက မရိုးသားဘူးဆိုတာ သိသာပါတယ်။ အတုမှန်သမျှ မှုံဝါးနေတယ်ဆိုတာ သတိပြုပါ။ အတုလို့ နာမည်ကြီးနေတဲ့ ဘင်လာဒင်ဗီဒီယို၊ လပေါ်လမ်းလျှောက်တဲ့ ဗီဒီယို တွေလဲ မှုံမှုံဝါးဝါးနဲ့ မသဲကွဲကျပါဘူး။
အဲလို နအဖကို ပိုပြီးရက်စက်တယ် ထင်အောင် လုပ်တာ အပေါ်ယံတွေးကြည့်ရင် ဆန္ဒပြသူတွေ ပိုများလာမယ်ပေါ့ဗျာ။ တကယ် အကျိုးဆက်ကတော့ ပြောရခက်တယ်ဗျ။ တချို့အခြေအနေမှာ ဆန္ဒပြသူ ပိုများ လာနိုင်ပါတယ်။ ကျနော့ အထင်ပြောရရင် လူအများစုဟာ အကြောက်လွန်ပြီး ဆန္ဒ မပြရဲပဲ ဖြစ်ကုန်မယ် ထင်တယ်ဗျ။ တချို့လည်း ဒေါသတွေ ထွက်ပြီး ဘာကို လုပ်သင့်လဲ မှန်မှန်ကန်ကန် မစဉ်းစားနိုင်ပဲ ပေါက်ကရတွေ လုပ်ပြီး အဆင်မပြေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ကရာတေး ကစားသလိုပေါ့ဗျာ။ ဒေါသမထွက်ပဲ စိတ်တည်ငြိမ်မှ တိုက်ကွက်ကောင်းကောင်းနဲ့ ကစားနိုင်ပါတယ်။
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတိုင်းမှာ မှန်ကန်သော စာရင်းဇယားက အရေးကြီးပါသည်။ နိုင်ငံရေး လှုပ်ရှားသူများ အတွက်လည်း မှန်ကန်သော သတင်းများက အရေးကြီးပါတယ်။ ဆိုက်ဝါး လိမ်ညာဝါဒတွေ လုပ်ရင် နအဖရဲ့ တိုက်ကွက်ကို မမြင်ဖြစ်ပြီး ဒုက္ခများနိုင်ပါတယ်။ ရိုးသားဖို့အတွက် သတိထားရန် တင်ပြလိုက်ပါတယ်။
(နောက်အပတ်တွေတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာ အကြောင်းများသာ ဦးစားပေးတင်ပြသွားပါမည်။ ငြိမ်းအေးမှုလေး ရအောင်လို့ပါ)
Posted by * In Search of Truth * at 9:07 PM6comments Links to this post